အေး​အေး​ခိုင်ရဲ့​ တ​ဏှာ​ဇာတ်​ကြမ်း – Grab Love Story
​အေး​အေး​ခိုင် ​မှာ ​အ​သက် ၃၃ ​ခန်. ​အ​သား​ဖြူ​ဖြူ ​ကိုယ်​လုံး​သွယ်​ပြီး ​အ​နေ​တော်​ပင် ​ဖြစ်​သည် ၊ ​သူ. ​ယောက်​ကျား ​ဦး​သိန်း​ဟန် ​မှာ ​လုပ်​ငန်း​ကြီး​တ​ခု​ပိုင်​ဆိုင်​ပြီး ​ငွေ​ကြေး​တောင်.​တင်း ​လျှက် ​အ​မြဲ​အ​လုပ်​များ​နေ​သူ​ဖြစ်​၏၊​သူ​တို.​တွင် ​အ​ပျို​ပေါက် ​သ​မီး ၂ ​ယောက် ​ရှိ​ပြီး ​အ​ကြီး​မ​သ​ဇင် ​က ၁၉ ​နှစ် ၊ ​အ​ငယ်​မ ​သူ​ဇာ ​က ၁၇ ​နှစ် ​ဖြစ်​ကြ​သည်၊ ​သူ​တို. ​မိ​သား​စု ​တွင် ​ကား ၃ ​စီး ​ရှိ​ပြီး ​ဦး​သိန်း​ဟန် ​က​တ​စီး၊ ​အေး​အေး​ခိုင် ​က​တ​စီး၊ ​သ​မီး ၂​ယောက် ​က​တ​စီး ​စီး​ကြ​သည်၊ ​ဦး​သိန်း​ဟန် ​က ​အ​မြဲ​တမ်း ​အ​လုပ်​များ​နေ​တတ်​ပြီး ​အိမ် ​မ​ကပ်​သ​ဖြင်. ​မ​အေး ​တ​ယောက် ​တ​ခါ​တ​ခါ ​ခံ​ခြင်​သော ​အ​ချိန်​တွင် ​ယောက်​ကျား ​က​မ​အား​ရ်ျ ​လက်​ထည်.​ပြီး ​က​လိ ​စိတ်​ဖြေ ​ရ​သည်​မှာ ​အ​ယား​မ​ပြေ​လှ​ပေ ၊ ​ဒီ​လို​နဲ. ​ကား​တ​စီး​ဖြင်.​အ​ပြင်​ထွက် ​စိန် ​ရ​တ​နာ ​ပွဲ​စား ၊​အိမ်​ပွဲ​စား ​လုပ် ​ရင်း ​ကား​ဝယ်​ရောင်း ​ကို​အောင် ​ဆို​သူ​နှင်. ​ရင်း​နှီး ​နေ​မိ​သည် ​ကို​အောင် ​မှာ ​ရုပ်​ရေ​သန်.​ပြန်.​ပြီး ​မ ​ကျမ်း​ကျေ​သူ ​တ​ဦး​မို. ​မ​အေး ​တ​ယောက် ​ကောင်း​ကောင်း ​အ​လိုး​မ​ခံ​ရ ​ရ်ျ ​အ​လို​မ​ကျ​ဖြစ်​နေ​သည် ​အ​လိုး​ခံ ​ချင်​နေ​သည်​ကို ​ရိပ်​မိ​သည်၊
​တ​နေ.​တွင် ​ကို​အောင် ​က ​အိမ်​တ​လုံး​ပြ​ရန် ​မ​အေး ​အား​ညာ​ခေါ်​လိုက်​သည်၊ ​သူ.​သူ​ငယ်​ချင်း ​၏​အိမ် ​ကို​အောင် ​စော်​ခေါ်​ချ​နေ​ကြ ​ဘိ​ဖြစ်​သည် ၊ ​ထို​အိမ်​အ​ရောက်​တွင် ​မ​အေး ​က ‘ ​ကို​အောင် ​ဒီ​အိမ် ​က ​ဘယ်​လောက်​ပြော​လဲ ​နေ​ရာ​လည်း​ကောင်း​ပါ​တယ် ​အေး ​စပ်​ပေး​မယ် ’ ‘ ​အင်း ​ပိုင်​ရှင် ​က ​ကျွန်​တော်.​ကို ​လွဲ​ထား​တာ ​မ​အေး ​ဘယ်​လောက်​ဖြစ်​မယ်​ထင်​လည်း ’​ဟု ​ပြော ​ရင်း ​မ​အေး ​အ​နား​ကပ်​သွား​သည် ၊ ‘ ​မ​အေး ​လဲ ​ကို​အောင် ​အ​နား​ကပ်​လာ​တာ ​မ​သိ​ယောင်​ဆောင် ​ပြီး​ကျော ​လှည်.​ကာ ​ဖင်​ကို​န​ဂို​ထက် ​ပို​ကောက်​ထား​လိုက်​သည် ​မ​အေး ​မှာ​န​ဂို​က​ပင် ​ဖင်​ကောက် ​တာ​မို. ​ပို​ကော.​ပြီး​အိုး​ကြီး​ပြူး​လာ​သည် ၊ ​ကို​အောင် ​လည်း ​မ​အေး ​ဖင် ​ကို​ကြည်.​ကာ ​လိုး​ချင်​စိတ်​များ ​တ​ဖွား​ဖွား​ပေါ်​လာ​သည် ၊ ​မ​အေး ​သည် ​အ​သား​ဖြူ ​ပြီး ​နို.​သိပ်​မ​ကြီး​ပဲ ​ခါး​သေး ​ဖင်​ကောက် ​အိုး ​လုံး​လုံး​ဖြင်. ​အ​တော်​ပင်​ကြည်.​ကောင်း​ကာ ​လိုး​ချင်​စ​ဖွယ် ​ပင်​ဖြစ်​သည်၊ ​ပြူ​တင်း​ပေါက် ​တ​ခု ​နား​အ​ရောက် ​မ​အေး ​သည် ​ပြူ​တင်း​ပေါက် ​ဘောင်​တွင်​လက် ​ထောက်​ကာ ​ဖင်​ကို​အ​နောက်​သို. ​ကော.​ကာ ​မ​သိ​မ​သာ​ခါ​ရမ်း​ပြီး ​ကို​အောင် ​ကို ​က​လိ​နေ​၏ ၊ ​ကို​အောင် ​လည်း ​မ​နေ​နိုင်​တော.​ဘဲ ​မ​အေး ​အား ​အ​နောက်​မှ​သိုင်း​ဖက်​လိုက်​ပြီး ​မ​အေး ​ဖင်​ကြား​ထဲ ​လီး​ကြီး​တေ.​ကာ ‘ ​မ​မ​အေး ​က​အ​ရမ်း​လှ​ပြီး​ချစ်​လို.​လည်း​တ​အား​ကောင်း​မှာ​ပဲ ’​ဟု​ပြော ​ရင်း ​လက်​နှစ်​ဘက် ​က​လည်း ​မ​အေး​၏ ​နို.​အ​စုံ ​ကို​နယ်​ရင်း ​လည်​ဂုတ်​သား​ဖွေး​ဖွေး ​ကို ​နမ်း​ရှုံ ​နေ ​သည် ၊ ‘ ​အင်း​ဟင်း​ဟင်. ​အို ​ကို​အောင်​လေး ​က ​အ​ရမ်း​ပဲ ​ဟင်. ​အင်. ​အေး ​နေ​တတ်​တော.​ဘူး ’ ​ဆို​ကာ ​မ​အေး ​လည်း ​တွန်.​လိမ်​ကာ ​ကာ​မ​ပိုး​များ ​ထြွ​က ​လာ​ပြီး ​ဖင်​ကို ​အ​နောက်​သို.​ကော. ​ကာ ​ကို​အောင်. ​လီး​ကြီး ​ကို ​ပွတ်​တိုက် ​နှိုး​ဆွ​ပေး​နေ​မိ​သည် ၊
​ကို​အောင် ​လည်း ​တ​ဆင်.​တက်​ပြီး ​မ​အေး​၏ ​အ​ကျီ​ကို ​ချွတ်​ကာ ​ဘ​ရာ​စီ​ယာ ​ကို​အ​ပေါ် ​လှန်​တင် ​ပြီး ​မ​အေး​၏ ​နို.​သီး​ခေါင်း ​နီ​နီ​လေး ​အား ​လက်​ဖြင်. ​ခြေ​မွ​ကှာ ​က​လိ​ပေး ​လိုက်​သည် ၊ ​မ​အေး ​လည်း ​ဖီးလ် ​ပို​တက်​လာ​ပြီး ​ထ​မီ​ကို​ချွတ်​ချ​ပေး​လိုက်​သည် ၊ ‘ ​အင်.​ဟင်. ​ကို​အောင် ​ရယ် ​အ​အို. ​ဟင်.​ဟင်. ​အင်. ’ ​အ​သံ​ထွက်​ရင်း ​တွန်.​လိမ်​ကာ ​အောင်. ​ထား​ရ​သ​မျှ ​အ​တိုး ​ချ ​အ​လိုး​ခံ ​ဖို. ​စဉ်း​စား ​ထား​သည် ၊ ​ကို​အောင် ​က ​ရုပ်​ရည်​သန်.​ပြန်.​ပြီး ​ဆွဲ​ဆောင်​မှု​ရှိ ​သ​ဖြင်. ​မ​အေး ​တွေ.​စ​က​ပင် ​သ​ဘော​ကျ ​ကာ ​ကုန်း​ချင်​နေ​တာ​ဖြစ်​သည် ၊
​ကို​အောင် ​လည်း ​မ​အေး​၏ ​ပင်​တီ ​ထဲ ​နှိုက်​ကာ ​စောက်​မွှေး​များ ​ပွတ်​ပေး​ရင်း ​စာ ၀၁/၂
​စောက်​ဖုတ် ​နှုတ်​ခမ်း ​ကို​ပါ ​ပွတ်​ပေး​လိုက်​သည် ၊ ​မ​အေး ​က​တော. ​မျက်​တောင် ​စဉ်း​ကာ ​ကော.​ပျံ ​နေ​တော.​သည် ၊ ‘​အင်.​ဟင်း​ဟင်း ​ဟင်. ​အ​ဟင်. ​ကို​အောင်​ရယ် ​အေး ​မ​နေ​တတ်​ဘူး ​ဟင်.​အင်. ’ ​ထို.​နောက် ​ကို​အောင် ​က ​မ​အေး ​ကို ​ဆွဲ​လှည်.​ပြီး ​နှုတ်​ခမ်း​ပါး​လေး ​ကို ​စုပ်​ယူ​ရင်း​လျှာ ​ထိုး ​ထဲ. ​ကာ ​က​လိ​နေ ​သည် ၊ ​လက် ​က​လည်း ​အ​နား​မ​ပေး​ဘဲ ​မ​အေး​၏ ​ဖင်​ဖြူ​ဖြူ​ကြီး ​ကို​ဖြဲ​ကာ ​ဆုပ်​နယ် ​ပေး​နေ​သည် ၊ ​မ​အေး ​က ​ဘ​ရာ​စီ​ယာ ​ကို​အ​သာ​ချွ​တှ်​ပေး​လိုက်​သည် ၊ ​မ​အေး​၏ ​နို.​မှာ ​သိပ်​မ​ကြီး​ဘဲ ​အ​နေ​တော်​ပင်​ဖြစ်​ကာ ​အ​သား​ဖြူ​လွန်း ​သ​ဖြင်. ​နို.​သီး​ခေါင်း ​မှာ​နီ​ရဲ​ပြီး​ထင်း​နေ​သည် ​ကို​အောင် ​လည်း ​နမ်း​စုပ်​နေ​တာ ​ခွာ​ပြီး ​မ​အေး ​ရဲ. ​ပင်​တီ ​ကို ​ချွတ်​ပေး​ရင်း ​စောက်​ဖုတ် ​ရှေ. ​တွင် ​ထိုင်​ချ​ကာ ​ပေါင်​ကား​စေ​ပြီး ​မ​အေး​ရဲ. ​နီ​ရဲ​ပြီး ​မို.​ဖေါင်း​ကာ ​နှုတ်​ခမ်း​ထူ ​သည်. ​စောက်​ဖုတ်​ကြီး ​အား ​စ​တင် ​လျှက်​ပေး​လိုက်​ပါ​သည် ၊ ‘ ​အ​ဟင်. ​ဟင်. ​အင်း . . . ​အို. ​ဟင်.​အ ​ဟင်.​ဟင်. ​ကို​အောင် ​ရယ် ​ကောင်း ​လိုက်​တာ ​ဟင်.​ဟင်. ’ ​မ​အေး ​လည်း ​ကောင်း​လွန်း​သ​ဖြင်. ​မ​ရှက်​နိုင် ​မ​အောင်.​နိုင် ​တော.​ဘဲ ​အ​သံ​ထွက်​ကာ ​ကော.​ပေး​နေ​သည်၊
​အ​တန်​ကြာ ​စောက်​ဖုတ် ​လျှက်​ပြီး​သော ​အ​ခါ ​မ​အေး ​စောက်​ဖုတ်​ကြီး ​မှာ​စောက်​ရည်​များ ​ရွှဲ​ကာ ​ပေါင်​ကြား​သို. ​စီး​ကျ​လာ​ပါ​သည် ၊ ​မ​အေး ​မှာ ​တ​ခါ​မျှ ​စောက်​ဖုတ် ​အ​လျှက်​မ​ခံ​ဘူး​သ​ဖြင်. ​တွန်.​ရွ​နေ​ကာ ​တ​ချီ​ပင်​ပြီး ​သွား​ပါ​သည် ၊
​ပြီး​လျှင် ​ကို​အောင် ​လည်း ​မ​အေး​၏ ​စောက်​ပတ် ​လျှက်​နေ​တာ ​ရပ်​ပြီး ​ထ​ကာ ​မ​အေး ​အား ​ကု​တင်​ဆီ​ခေါ်​သွား ​ပြီး ​ပက်​လက်​လှဲ ​စေ​ကာ ​ပေါင်​နှစ်​ချောင်း​ဖြဲ​စေ ​ကာ ​အ​ပေါ်​မှ ​ခွ​ထိုင်​ပြီး ​မ​အေး ​ဂျိင်း​ဘေး ​လက်​ထောက် ​ကာ ​လီး​ကြီး ​ကို ​မ​အေး​၏ ​စောက်​ခေါင်းဝ ​တွင်​တေ.​ရင်း
‘​မ​မ​အေး ​ကို ​အောင် ​အ​ရမ်း​ချစ် ​တယ်​ဗျာ ​ကျွန်​တော. ​ကို ​ချစ်​ရဲ. ​လား ​ဟင် ’ ​ဆို​ရာ ​မ​အေး ​က ‘ ​ဟင်. ​အောင် ​က​လည်း ​အောင်. ​ဟာ​ကြီး ​က​ဖြင်. ​အေး ​စောက်​ပတ် ​ထဲ ​ဝင်​နေ​ပြီ ​ဟွန်း ​မ​ချစ်​ဘူး ​သိ​လား ’ ​ဟု ​ပြန် ​ညု​ရင်း ​က ​လီး​ကြီး ​ပို​ဝင်​စေ​ရန် ​ဖင်​ကို​ကော.​ပေး​လိုက်​သည် ၊ ​ကို​အောင် ​က ​ဘာ​မှ​ပြန်​မ​ပြော​ဘဲ ​ပြုံး​ကာ ​မ​အေး​၏ ​နှုတ်​ခမ်း​ပါး​လေး ​ကို ​စုပ်​ရင်း ​လီး​ကြီး ​ကို ​အ​ဆုံး​ထိ ​ဆောင်.​ချ ​လိုက်​ပါ​သည် ၊ ‘ ​အင်. ​အ​မ​လေး ​အောင်​ရဲ. ​ကျွတ်​ကျွတ် ​အ​ဟင်. ​ဟင်. ​ဖြေး​ဖြေး ​လုပ်​ပါ​အ​ဟင်.​အင်. ’ ​ကို​အောင် ​လီး​မှာ ​ကြီး​ပြီး ၇ ​လက်​မ​ခန်. ​မို. ​အ​ဆုံး ​ထိ ​ဆောင်.​ထဲ.​လိုက် ​ရာ ​မ​အေး ​မှာ ​အီ​ဆိမ်.​ပြီး ​သား​အိမ်​ခေါင်း ​ကို​သွား​ထောက် ​သ​ဖြင်. ​အောင်. ​သွား​သည် ၊ ​ကို​အောင် ​က​တော. ​မ​အေး ​မျက်​နှာ​လေး ​ကြည်.​ပြီး ​လိုး ​ရ​သ​ဖြင်. ​ဖီးလ် ​တက်​ကာ ​ဆက်​ကာ​ဆက်​ကာ ​ဆောင်.​လိုး​နေ​မိ​ပါ​သည် ‘ ​အင်.​အင်. ​အ ​ဟင်.​ဟင်. ​ဘွတ်​ဘွတ်​ဗျွတ်​ဗျွတ်​ဗျွတ် ​အိ. ​အ ​အ​အင်. ​အောင်​ရယ် ​အင်.​အင်. ​ဟင်.​ဟင်. ’ ​နှင်. ​မ​အေး ​လည်း ​ကောင်း​လွန်း ​လီး​ကြီး ​က ​ကြီး​လွန်း ​သ​ဖြင်. ​ရှုံ​မဲ. ​ကာ ​အ​လိုး​ခံ​နေ​ရ​သည် ၊ ​စောက်​ပတ် ​လျှက်​တုန်း​က ​တ​ချီ​ပြီး ​ထား​ရ်ျ ​စောက်​ရည်​များ ​ရွှဲ​နေ​ကာ ​ဘွတ်​ဗျွတ် ​ဖြင်.​ပင်​မည်​နေ​တော.​သည် ၊
​ကို​အောင် ​လည်း ​အ​ချက် ၄၀ ​ခန်. ​ဆောင်.​လိုး​ပေး​ပြီး ‘ ​ကဲ ​မ​မ​အေး ​တ​မျိုး​ပြောင်း​ရ ​အောင် ​လေး​ဘက်​ထောက် ​ဖင်​ကုန်း​ပေး​နော် ’ ​ဆို ​လိုက်​ရာ ​မ​အေး ​က​လည်း ​ငြင်း​မ​နေ​ဘဲ ​ဖင်​ကုန်း​ပေး​လိုက် ​ရာ ​မ​အေး​၏ ​စောက်​ပတ်​ကြီး ​မှာ ​နီ​ရဲ​ပြီး ​အ​နောက်​သို. ​ပြူး​ထွက်​လာ​သည် ၊ ​ကို​အောင် ​က ​မ​အေး ​အ​နောက်​မှ ​ဝင်​ကာ ​စောက်​ပတ်ဝ ​တွင် ​လီး​ကြီး ​ကို​တေ.​ကာ ​မ​အေး ​၏ ​ခါး​သေး​သေး​လေး​မှ​ကိုင် ​ကာ ​ဆောင်.​လိုး ​ပါ​တော.​သည် ၊
​မ​အေး ​မှာ​တော. ​ခံ​လို.​လဲ​ကောင်း ​လီး ​ရှည်​သ​ဖြင်. ​သား​အိမ်​ဆောင်. ​လို. ​အောင်. ​ကာ ​အံ​ကြိတ် ​ခံ​ရင်း ​ဖင်​ကြီး ​ကို ​အ​နောက်​သို. ​ပစ်​ကော.​ပေး​နေ​မိ​သည် ၊ ‘ ​ဗျွတ်​ဗျွတ် ​ဗွတ်​ဗွတ် ​ဖွတ် ​စာ ၀၁/၃
​ဘွတ်​ဘွတ် ​ဗျွတ်​ဗျွတ် ​အင်.​အင်. ​အ ​အ​ဟင်. ​အိ ​အိ ​ဟင်.​ဟင်.​အင်. ​အောင်​ရယ် ​အ​အ ’ ​အ​သံ​စုံ ​ထွက်​ကာ ​နှစ်​ဦး​သား ​ကာ​မ ​အ​ရ​သာ ​အ​ပြည်.၀​ခံ​စား​နေ​ကြ​သည်၊ ​မ​အေး ​အ​ဖို.​မှာ​တော. ​ငတ်​နေ ​သ​မျှ ​အ​ခု​မှ​ပင် ​အ​တိုး​ချ​ကာ ​အ​လိုး​ခံ​နေ​ရ​တာ​မို. ​ခ​ဏ​ခ​ဏ​ပင် ​ပြီး​နေ​ပါ​တော.​သည် ၊ ​ကို​အောင် ​လည်း ​ဆောင်.​လိုး ​လိုက်​တိုင်း ​မ​အေး ​ဖင်​ကြီး ​တွန်.​ပြီး​ကော.​သွား​တာ ​ကြည်. ​ရင်း ​အ​ချက် ၄၀/၅၀ ​ခန်. ​ခပ်​ကြမ်း​ကြမ်း​ဆောင်.​လိုး ​ကာ ​လ​ရည်​များ ​မ​အေး ​စောက်​ခေါင်း ​ထဲ ​ပန်း​ထုတ်​ကာ ​ပြီး​သွား​သ​ဖြင်. ​မ​အေး ​ပေါ်​မေုာက်​လျှက် ​မ​ချွတ်​ဘဲ ​ထပ်​အိပ်​ကာ ​အ​မော​ဖြေ​နေ​၏၊ ‘ ​အောင် ​အေး ​တို. ​ထပ်​တွေ.​ကြ​အုံး​မယ်​နော် ’ ​ဟု ​မ​အေး ​က ​လီး​ကြီး ​ကို​စွဲ​သွား​ကာ​မှာ​နေ ​ပါ​သည် ၊ ‘ ​စိတ်​ချ ​မ​မ​အေး ​ကို ​တ​နေ.​တ​မျိုး ​မ​ရိုး​အောင် ​ပုံ​စံ ​အ​စုံ ​အ​မြဲ​လိုး​ပေး​နေ​မှာ ’ ​ပြော​ပြီး ​မ​အေး ​ကို ​နမ်း​စုပ် ​လိုက်​ပါ​သည် ။
​မ​အေး​ရဲ. ​ဖင်​ဆော. ​သင်​ခန်း​စာ ၁ ​ပြီး​ပါ​ပြီ ။ ။
​မ​အေး ​လည်း ​ကို​အောင် ​နဲ. ​အား​ရ​အောင် ​ကုန်း​အ​ပြီး ​တိုက် ​ထဲ​က ​ထွက်​လာ​တော. ​ဒ​ရိုင်​ဘာ ​ရာ​ဂျူး ​က ​ပြုံး​ပြုံး​ကြီး ​လုပ်​ကာ ​မ​အေး ​တ​ကိုယ်​လုံး ​အား ​သိမ်း​ကြုံး ​ပြီး ​ကြည်.​နေ​သည် ၊ ​မ​အေး ​လည်း ‘ ​ဟဲ. ​ဘာ​ကြည်.​နေ​တာ ​လဲ ​အိမ်​ပြန်​မယ်​လေ ’ ​ဟု​ပြော​ပြီး ​စိတ်​ထဲ​မှာ ​တော. ‘ ​အင်း ​ရာ​ဂျူး ​တော. ​ရိပ်​မိ​သွား​လား ​မ​သိ​ဘူး ’ ​ဟု​တွေး​ရင်း ​ပြန်​လာ​ခဲ.​ပါ​သည် ၊ ​ရာ​ဂျူး ​က​တော. ​ကို​အောင် ​နဲ. ​မ​အေး ​လိုး​နေ​တာ ​ချောင်း​ကြည်.​ပြီး​တွေ.​ထား​တာ​မို. ​ကား​မောင်း​ရင်း ​နောက်​ကြည်.​မှန် ​မှ ​ခိုး​ကြည်.​ကာ ​တက်​လိုး ​ချင်​စိတ်​များ ​ပေါ်​လာ​ပါ​သည် ၊ ​မ​အေး ​မှာ ​မီး​ကုန် ​ယမ်း​ကုန် ​အ​လိုး​ခံ​ထား​ရ​ရ်ျ ​မျက်​တွင်း​ပင် ​ညို​နေ​တော.​သည် ၊
​မ​အေး ​လည်း ​ရာ​ဂျူး ​နောက်​ကြည်.​မှန်​မှ ​ကြည်.​နေ​တာ ​တွေ.​ပြီး ‘ ​ဟင်း ​ခက်​ပြီ
​ရာ​ဂျူး ​တော. ​ငါ ​ကုန်း​တာ ​တွေ.​သွား​ပြီ ​နဲ. ​တူ​တယ် ​ချော.​ပေါင်း​ထား​မှ ​ဖြစ်​မယ် ’ ​တွေး​ရင်း ‘ ​ရာ​ဂျူး ​ရော. ​ဘောက်​ဆူး ​ဒီ​နေ. ​အ​မ ​ပွဲ​ခ ​ရ​လို.​ပေး​တာ ’ ​ဟု​ပြော​ပြီး ​ပိုက်​ဆံ ​ကို ​ရာ​ဂျူး ​ပေါင် ​ပေါ် ​တင်​ပေး​လိုက်​ရာ ​တောင်​နေ​သော ​လီး​ကြီး ​ကို ​သွား​စမ်း​မိ ​ကာ ​မ​အေး ​လည်း ​တွန်. ​က​နဲ ​ဖြစ်​သွား​သည် ၊
​ရာ​ဂျူး ​က​တော. ​ဖီးလ် ​တက်​ကာ ​လီ​ဗာ​ကို ​ဖိ​နင်း ​လိုက်​တော.​သည် ။
​စာ ၀၂/၃ ​မ​အေး​၏ ​ကု​လား​လီး ​အ​တွေ.​အ​ကြုံ
​မ​အေး ​လည်း ​အား ​လျှင် ​အား​သ​လို ​ကို​အောင် ​နှင်. ​စ​ခန်း​သွား​နေ​ရင်း ​ကို​အောင် ​နယ် ​ဘက်​ကို ​ခ​ရီး ​ထွက်​သွား ​သ​ဖြင်. ​မ​ခံ ​ရ​တာ ၁၀ ​ရက်​ခန်.​ပင် ​ရှိ​ပြီ​မို. ​လီး ​ငတ်​နေ​ချိန်​ပင် ၊
​စိတ်​ပြေ​လက်​ပျောက် ​စ​ကော.​ဈေး ​သွား ​ရန် ​အ​ဝတ်​စား ​လည်း​ပြီး ​ရာ​ဂျူး ​ကို ​လှမ်း​ခေါ်​ရာ ​ပြန်​ထူး​သံ ​မ​ကြား​ရ်ျ ​ရာ​ဂျူး​၏ ​တန်း​လျား​ထဲ ​ဝင်​သွား ​လိုက်​ရာ .. .. ​ရာ​ဂျူး ​မှာ ​ကု​တင်​ပေါ်​တွင် ​ပု​ဆိုး ​လှန်​ပြီး​ဂွင်း​ထု​နေ​တာ ​တွေ.​လိုက်​ရ ​တော. ​လန်.​သွား ​ကာ ​ရင်​ခုန်​လာ ​ပြီး ​ရာ​ဂျူး​၏ ​လီး ​ကြီး ​မှာ ​အ​တော်​တုတ်​ပြီး ၇ ​လက်​မ​ခန်.​မို. ​ကို​အောင် ​လီး ​ထက်​ပင် ​ပို​တုတ်​ပြီး​ရှည်​တာ​မို. ​မ​အေး ​ဖင် ​ပွ​စိ​ပွ​စိ ​ဖြစ်​ကာ ​ဖီးလ် ​နဲ​နဲ ​လာ​သွား​သည် ၊
​ရာ​ဂျူး ​က​တော. ​ထ​လာ​ပြီး ​အ​ခွင်.​ကောင်း​မို. ‘ ​လာ​လေ ​အ​မ ’​ဟု ​ဆို​ယင်း ​မ​အေး​၏ ​လက်​ကို ​ကိုင်​ကာ ​လီး​ကြီး ​ပေါ်​တင်​ပြီး ​ဂွင်း​ထု​သ​လို ​လုပ်​နေ​သည် ၊ ​မ​အေး ​လည်း ​ရင်​ခုန်​ကာ ​ဘာ​မှ ​ပြန်​မ​ပြော​နိုင်​ဘဲ ​လီး​ကြီး ​ကို​ဆုပ်​ကိုင်​ရင်း ​ကြည်.​လိုက်​ရာ ​ရာ​ဂျူး​၏ ​လီး​ကြီး​မှာ ​မဲ​ပြောင် ​တင်း​မာ​နေ​ပြီး ​မ​အေး ​လက်​ပင် ​မ​ဆံ.​အောင် ​တုတ်​နေ​တာ ​သိ​လိုက်​ရ်ျ ​စောက်​ပတ် ​ပင် ​အ​ရည်​စို ​လာ​တော.​သည် ၊ ​ရာ​ဂျူး ​က ​အ​နား​ကပ်​လာ​ပြီး ​မ​အေး ​အ​ဝတ်​စား​များ​ကို ​ချွတ်​ပေး​နေ​သည် ၊ ​မ​အေး​က ​ဖြူ​ဖြူ ​ရာ​ဂျူး​က ​မဲ​မဲ ​နင်. ​ရာ​ဂျူး ​ဖက်​ပြီး ​မ​အေး ​ဖင်​ကြီး ​ကို ​လက်​နှစ်​ဖက်​ဖြင်. ​ကိုင်​ပြီး ​နယ်​နေ​သည်​မှာ ​ထင်း​က​နဲ​ဖြစ်​နေ​၏ ၊ ​မ​အေး​၏ ​ဆီး​ခုံ ​တွင် ​လီး​ကြီး ​လာ​ထောက်​သ​ဖြင်. ​ပူ​ပူ​ကြီး ​ဖြစ်​နေ​ကာ ​ဖီးလ် ​တက်​လာ​ပြီး ​မ​အေး​လည်း ​မျက်​တောင်​စင်း ​ခေါင်း​မော.​ကာ ​ရာ​ဂျူး ​နမ်း​စုပ်​မှာ ​ကို​စောင်.​နေ​တော.​သည် ၊
​ရာ​ဂျူး​က​လည်း ​မ​အေး ​နှုတ်​ခမ်း​ပါး​လေး ​အား​နမ်း​စုပ်​လိုက်​ပြီး ​လက်​က ​နို.​ကို​နယ်​လိုက် ​ဖင်​ကြား ​ခ​ရေ ​ကို ​က​လိ ​လိုက် ​တ​ဖက်​က ​စောက်​ပတ်​ကြီး​ကို ​ပွတ်​တိုက်​လိုက်​နှင်. ​လက်​မ​လည် ​ပေ၊ ​မ​အေး ​က​တော. ​ကု​လား ​နှုတ်​ခမ်း​ကို ​ပြန်​စုပ်​ကာ ​တွန့်​လိမ်​နေ​ပြီး ​ကော.​ကာ ​စောက်​ပတ်​နှင်. ​လီး​ကြီး ​ကို ​ပွတ်​နေ​တော.​သည် ၊ ​တ​ဖြေး​ဖြေး ​နှင်. ​မ​အေး ​လည်း ​ထန်​လာ​ပြီး ​မ​ရှက်​တော.​ဘဲ ​ဒူး​ထောက်​ထိုင်​ချ​ကာ ​ကု​လား​၏ ​လီး​မဲ​မဲ​တုတ်​တုတ်​ကြီး ​အား ​စုပ်​ရင်း ​ဂွေး​အု​ကို​ပါ​လျှက်​ပေး​နေ​ပါ ​သည် ၊ ​ရာ​ဂျူး ​က​တော. ​ဖီးလ်​တက်​ပြီး ​မ​အေး ​ခေါင်း​ကို​ကိုင်​ကာ ​လီး​ကြီး​ကို ​ညောင်.​ပေး​နေ​၏ ၊ ​ထို.​နောက် ​ကု​တင်​ပေါ် ​တက်​လိုက်​ရင်း ​မ​အေး ​က ‘ ​ရာ​ဂျူး ​ရယ် ​ဘယ်​ပုံ​စံ ​လုပ်​မှာ​လဲ ​ပြော ’ ​ဟု ​ဆို​လိုက်​သ​ဖြင်. ‘ ​အ​မ ​လေး​ဘက်​ထောက်​ပေး ​ကျွန်​တော် ​အ​နောက်​က​နေ ​လိုး​ပေး​မယ်’ ​မ​အေး ​လည်း​ငြင်း​မ​နေ​ဘဲ ​ဖင်​ကုန်း​ပေး​လိုက်​ရာ ​စောက်​ပတ်​ကြီး​မှာ ​ပြူး​ပြီး ​ထွက်​လာ​၏ ​ရာ​ဂျူး ​လည်း ​မ​အေး​၏​ဖင်​ဖြူ​ဖြူ ​ဖွေး​ဖွေး​ကြီး​အား​ခွ​ကာ ​ဖင်​ကို​လက်​မဲ​ကြီး​ဖြင်.​ဖြဲ​ပြီး ​ဒစ်​ကို​စ​သွင်း ​ပါ​တော.​သည်၊ ​မ​အေး​က ‘ ​ရာ​ဂျူး ​ဖြေး​ဖြေး​နော် ​နင်. ​ဟာ​ကြီး​က ​အ​ကြီး​ကြီး​ပဲ ​ငါ ​ကြောက် ​တယ် ’ ‘ ​မ​ကြောက်​ပါ​နဲ. ​အ​မ​ရယ် ​ဒီ​လီး​ကြီး ​က​အ​မ ​ကို ​ကောင်း​အောင် ​လိုး​ပေး​မှာ​ပါ ’ ​ပြော ​ရင်း ​ဆောင်.​လိုး​ပါ​တော.​သည် ‘ ​ဘွတ်​ဘွတ်​ဘွတ် ​ဗျွတ်​ဗျွတ်​စွပ်​စွပ်​ဗျွတ်​ဗျွတ် ​အ​အ ​အင်.​ဟင်. ​ရာ​ဂျူး​ရယ် ​ကြီး​လိုက်​တာ ​အင်.​အင်.​အ​အ​ဟင်.​အိ. ​အိ.​အို. ​ငါ. ​စောက်​ပတ်​လေး​တော.​ကွဲ​ပါ​ပြီ​အင်. ​အင်. ​ဗျွတ်​ဗျွတ် ​ဗတ်​ဗတ်​ဘွတ်​ဘွတ် ​အင်.​ဟင်. ​အ​မ​လေး ​အင်.​အ ​ဟင်.​ဟင်. ​အိ​အိ ​အို. ’ ​နင်. ​အ​သံ​စုံ​ထွက်​ကာ ​မ​အေး ​လည်း ​န​ဂို​က​ပင် ​ဏှာ​ကြီး​ပြီး ​ထန်​သူ​မို. ​အ​ရှက်​မ​ရှိ​တော.​ဘဲ ​ဖင်​ကို ​အ​နောက်​သို.​ကော.​ကာ​ပစ်​ပေး​ရင်း ​လော​က​ကို​မေ.​နေ​တာ​မို. ၊ ​ဒီ​နေ.​အ​တန်း​မ​ရှိ​ရ်ျ ​ကား​လာ​ကြို ​တာ ​မ​စောင်.​ဘဲ​ပြန်​လာ​သည်. ​အ​ကြီး​မ ​မ​သ​ဇင် ​အိမ်​အ​ရောက် ​ဘယ်​သူ​မှ​တွေ.​သ​ဖြင်. ​တန်း​လျှား ​ကို ​ရောက်​လာ​ပြီး ​စေ.​ထား​သည်. ​တံ​ခါး​ကြား​မှာ​ကြည်.​လိုက်​ရာ ​သူ.​အ​မေ ​မ​အေး ​က​ဖင်​ထောင် ​ကာ​ကုန်း​နေ​ပြီး ​ဒ​ရိုင်​ဘာ ​ကု​လား ​က​နောက်​မှ ​တက်​လိုး​နေ​တာ ​အ​နီး​ကပ်​မြင်​ရ​တာ​မို. ​ရင်​တုန် ​ကာ ​အ​ပျို​ရိုင်း​လေး ​စ​အို ​ပွ​စိ​ပွ​စိ​ဖြစ်​ကာ ​စောက်​ပတ်​လေး​မှ ​အ​ရည်​များ​စီး​ကျ​လာ​ပြီး ​သူ.​အ​မေ ​နေ​ရာ​ဝင် ​ခံ ​ကြည်.​ချင်​လာ​မိ​သည် ၊​ကု​လား​၏​လီး​မဲ​မဲ​ကြီး​မှာ ​သူ.​အ​မေ​၏ ​စောက်​ခေါင်း​ထဲ ​ဝင် ​စာ ၀၂/၅
​လိုက်​ထွက်​လိုက် ​နှင်. ‘ ​ဗျွတ်​ဗျွတ်​ဘွတ်​ဘွတ် ​စွပ်​စွပ် ​အင်.​အင်. ​ဟင်. ​အ​အ​အိ ​ရာ​ဂျူး ​ရယ် ​အို.​ဟင်. ​မ​ရပ်​နဲ. ​အင်.​အင်. ​မ​ရပ်​နဲ. ​ဟင်.​ဟင်. ​ကောင်း​လိုက်​တာ ​ဟင်. ​ဟင်. ’ ​အ​သံ​ထွက် ​ကာ ​သူ.​အ​မေ ​အ​ရှက်​မ​ရှိ ​အ​လိုး​ခံ​နေ​တာ​ကြည်.​ပြီး ​မ​သ​ဇင် ​လည်း ​သူ.​အ​မေ​ဗီ​ဇ ​အ​တိုင်း ​ဏှာ​ထန်​သူ​လေး​မို. ​ကု​လား ​အ​လိုး​ခံ​ကြည်.​မယ်​ဟု ​တေး​ထား​ရင်း ​ကြည်.​မဝ​သေး​သော​လဲ ​လှည်.​ပြန်​လာ​ခဲ.​တော.​သည် ၊ ​သည်​လို​နဲ. ​အ​ချက် ၅၀ ​ခန်. ​ခပ်​ကြမ်း​ကြမ်း​ဆောင်.​လိုး​ပြီး ​မ​အေး ​စောက်​ပတ် ​ထဲ ​လ​ရည်​များ​ပန်း​ရင်း ​မ​အေး​ပါ ​ပြီး​သွား​တာ ​မို. ​စောက်​ပတ်​ကို ​ရှုံ​ပွ​ရှုံ​ပွ ​လုပ်​ကာ ​ရာ​ဂျူး​၏ ​လ​ရည်​ကို ​တ​စက်​မ​ကျန် ​စုပ်​ယူ​ကာ ၂ ​ဦး​သား​ပြီး​သွား​ပါ​သည် ၊ ​ထို.​နောက် ​မ​အေး ​လည်း ​အ​ဝတ်​စား​ပြန်​ဝတ် ​ပြီး ​ရာ​ဂျူး ​အား ​အ​နမ်း​ပေး​ပြီး ​ဘယ်​သူ. ​မှ​မ​ပြော​ရန်​မှာ​ကြား​ကာ ​နောက်​လစ်​လျှင်​လဲ ​လိုး​ပေး​ရန်​ပါ​ပြော​ပြီး ​ဟန်​မ​ပျက်​ပြန် ​ထွက်​လာ​ခဲ.
​မ​အေး​၏ ​ဖင်​ဆော. ​လေ.​ကျင်.​ခန်း ၂ ​ပြီး​ပါ​ပြီ ။ ။
​စာ ၀၃/၅ ​မ​သ​ဇင်​၏ ​အ​တွေ.​ကြုံ​သစ်
​ည​ဘက် ​စာ​ကျက်​နေ​ရင်း ​မ​သ​ဇင် ​နေ.​လည်​က ​သူ.​အ​မေ​ကို ​ဒ​ရိုင်​ဘာ ​ကု​လား ​တက်​လိုး ​နေ​တာ​ပြန်​မြင်​နေ​ပြီး ​ထ​မီ​လှန်​ကာ ​စောက်​စေ.​လေး​ကို ​လက်​ဖြင်. ​က​လိ​နေ​မိ​သည် ၊ ​မ​သ​ဇင် ​က ​ကျောင်း​တွင် ​ရည်း​စား​နှင်. ​နမ်း​တာ ​နို.​ကိုင်​ဖင်​ကိုင်​တာ​လောက် ​သာ​ကြုံ​ဖူး​သေး​တာ​မို. ​အ​လိုး​ခံ ​သည်. ​အ​ရ​သာ ​ခံ​ကြည်.​ချင်​နေ​မိ​သည်၊ ​ဒီ​လို​နဲ. ​ညည်.​နက်​လာ​တော. ​ကော်​ဖီ​သောက်​ရန် ​မီး​ဖို​ချောင် ​အ​ရောက် ​တန်း​လျှား​ဘေး ​အုတ်​ကန်​တွင် ​ကိုယ်​တုံး​လုံး ​ရေ​ချိုး​နေ​သော ​ရာ​ဂျုး​ကို ​တွေ.
​လိုက်​ရ​သ​ဖြင်. ​မ​သ​ဇင် ​လည်း ​ရင်​တုန်​ကာ ​မီး​ပိတ်​လိုက်​ပြီး ​ချောင်း​ကြည်.​နေ​မိ​သည် ၊ ​မ​သ​ဇင် ​မှာ ​ကု​လား​၏ ​လီး​ကြီး​ကို ​ကြည်.​ကာ ​စောက်​ပတ်​ထဲ​လက်​နှိုက် ​က​လိ​နေ​မိ​သည်၊ ​ကု​လား​၏​လီး ​မှာ ​အ​တော်​တုတ်​ပြီး ၇ ​လက်​မ ​ခန်.​မို. ​မ​သ​ဇင် ​ရင်​တုန်​ကာ ​ခံ​လည်း​ခံ​ချင် ​ကြောက်​လည်း​ကြောက်​ဖြစ်​နေ​သည် ၊ ​နောက်​တော. ​ရာ​ဂျုး​လည်း ​ရေ​ချိုး​ပြီး​သွား ​သ​ဖြင်. ​မ​သ​ဇင် ​လည်း ​အ​ခန်း​သို.​ပြန်​လာ​ခဲ.​သည် ၊ ​နောက်​တ​နေ. ​တွင် ​နေ.​လည်​ဘက် ​အ​တန်း​မ​ရှိ​သ​ဖြင်. ​မ​သ​ဇင်​အိမ်​သို.​စော​ပြီး​ပြန်​လာ​ခဲ. ​သည်၊ ​အ​ခန်း​ထဲ​အ​ရောက် ​မီး ​မ​လင်း​သ​ဖြင်. ​တန်း​လျှား​ဆီ​လာ​ခဲ.​ရာ ​ရာ​ဂျုး​ကို​တွေ. ​သ​ဖြင်. ​ကြည်.​ပေး​ရန် ​အ​ခန်း​ထဲ​သို.​ခေါ်​လာ​ခဲ.​သည်၊ ​ရာ​ဂျုး​မှာ ​မ​အေး ​အား ​ကို​အောင် ​တိုက်​ခန်း​ပို.​ပြီး ​အိမ်​ပြန်​ရောက်​နေ​တာ​မို. ​မ​သ​ဇင် ​ခေါ်​ရာ ​လိုက်​လာ​ရင်း ​မ​သ​ဇင်​၏ ​လုံး​ပြီး​ကော.​နေ​သည်.​ဖင် ​ကို ​ကြည်.​ကာ ​လိုး​ချင်​စိတ်​များ ​ပေါ်​လာ​သည် ၊ ​မ​သ​ဇင် ​မှာ​အ​သား​ဖြူ​ပြီး ​ကို​ရီး​ယား​မင်း​သ​မီး ​လေး ​ကဲ.​သို.​ချော​မော​ပြီး ​ခါး​သေး​ဖင်​ကောင်း ​ကာ​အ​နောက်​သို.​ကော.​နေ​သည် ​နို.​မှာ​အ​နေ​တော်​ပင် ​ဖြစ် ​ပြီး ​တင်း​တင်း​မို.​မို.​လေး​မို. ​မြင်​သူ​တိုင်း​က ​လိုး​ချင်​စ​ရာ​ပင်​ဖြစ်​သည်၊
​အ​ခန်း​ထဲ​ရောက်​တော. ​ရာ​ဂျုး ​လည်း ​လှေ​ခါး​ဖြင်. ​မီး​ချောင်း​ကို ​တက် ​ကြည်.​ပြီး ​အ​သစ် ​လဲ​ပေး​လိုက် ​သည် ၊ ​ပြန် ​အ​ဆင်း​တွင် ​ခြေ​ချော်​ကာ ​မ​သ​ဇင် ​ကို​ပါ ​တိုက်​မိ​ပြီး ​ကု​တင် ​ပေါ်​သို. ​ထပ်​လျှက်​သား ​ကျ​သွား​ပြီး ​လက်​တ​ဖက် ​က​လည်း ​မ​သ​ဇင်​၏ ​နို.​ကို ​ကိုင်​မိ​နေ​သည် ၊ ​နှစ်​ဦး ​စ​လုံး ​ရုတ်​တ​ရက်​ဖြစ်​သွား​ပြီး ​အ​တွေ.​အ​ကြုံ​နု​သည်. ​မ​သ​ဇင်​မှာ ​ကု​လား​၏ ​လီး​ကြီး ​သူ. ​စောက်​ပတ်​လေး​ပေါ်​ထောက်​မိ​နေ​သ​ဖြင်. ​တ​လျှပ်​လျှပ်​ဖြစ်​ကာ ​စောက်​ရည်​များ​ပင် ​စို.​လာ​ပါ​သည်၊ ​ရာ​ဂျုး ​က​တော. ​လက်​သွက်​သူ​မို. ​စဉ်း​စား​မ​နေ​ဘဲ ​မ​သ​ဇင်​၏ ​နှုတ်​ခမ်း ​ပါး​လေး​ကို ​စုပ်​နမ်း​ရင်း ​နို.​ကို​နယ်​ကာ ​လီး​ဖြင်. ​စောက်​ပတ်​လေး​ကို ​ပွတ်​ညေုာင်.​လိုက်​သည် ၊ ​မ​သ​ဇင် ​လည်း ​ညင်း​ဖို.​ပင် ​အ​ချိန်​မ​ရ​ဘဲ ​အ​ရ​သာ​တွေ.​ကာ ​ကု​လား​၏​နှုတ်​ခမ်း​ကြမ်း​ကြီး​ကို ​ပြန်​စုပ်​နမ်း​ရင်း ​ကော.​လိမ်​နေ​တော.​သည် ၊ ​မ​သ​ဇင် ​က ​ကြိုး​တ​ချောင်း​အ​ကျီ ​စ​ကဒ်​အ​တို​နှင်.​မို. ​ရာ​ဂျုး ​ချွတ်​ရ​တာ ​လွယ်​ကူ​လှ​သည် ၊ ​မ​သ​ဇင် ​က​တော.​ရှက်​ရှက် ​နှင်.​မို. ​မျက်​စိ​မှေး​ကာ ​ကု​လား​လုပ်​သ​မျှ​ခံ​နေ​လိုက် ​သည် ၊ ​ရာ​ဂျုး ​လည်း ​မ​သ​ဇင်​၏ ​နို.​သီး​ခေါင်း​နီ​နီ​လေး​ကို ​စုပ်​ငုံ​ကာ ​လျှာ​ဖြင်.​က​လိ​ပေး​လိုက်​ရာ ‘ ​အို. ​ဦး​ရယ် ​အင်.​ဟင်. ​အ ’ ​ဟု​ညည်း​ရင်း ​တ​ကိုယ်​လုံး ​တွန်.​လိမ်​ကာ ​ပေါင်​ကို​ကား​ပေး​လိုက်​၏ ​ထို.​နောက် ​ရာ​ဂျုး ​က​မ​သ​ဇင်​၏​စောက်​ပတ်​လေး​အား ​လက်​ဖြင်.​နှိုက်​က​လိ​ပေး​ရာ
​စောက်​ရည်​များ​စီး​ကျ​နေ​ပြီ​မို. ​တက်​လိုး​ရန် ​ပေါင်​နှစ်​ချောင်း​ကို​မ​ကာ ​ခွ​ထိုင်​လိုက်​ပြီး ​ဒစ်​ကြီး​ကို ​မ​သ​ဇင်​၏ ​စောက်​ပတ်ဝ​တွင် ​တေ. ​ကာ ​ဖြေး​ဖြေး​ခြင်း ​သွင်း​လိုက်​ပါ​သည် ၊
​မ​သ​ဇင် ​က​တော.​မျက်​တောင်​စင်း ​အံ.​ကျိတ်​အ​လိုး​ခံ​ရင်း​က ‘ ​အင်.​အင်.​အ ​ဟင်.​အိ ​အိ ​ဟင်. ​ဗျွတ်​ဗျွတ် ​အင်.​အင်. ​အ​ဟင်. ​ဟင်.​ဗျွိ​ဗျွိ​ဘွတ် ’ ​ကောင်း​လည်း​ကောင်း​ကြပ်​လည်း​ကြပ်​မို. ​ကော.​ကာ​တွန်.​လိမ်​နေ​ပါ​သည် ၊ ​ရာ​ဂျုး ​လည်း ​အ​စ​ပိုင်း​တွင် ​အ​ပျို​လေး​မို. ​ညှာ​နေ​သော်​လည်း ​တ​ဖြေး​ဖြေး ​အ​ရှိန်​ရ​ကာ ​မ​သ​ဇင် ​လည်း ​အောက်​မှ ​ကော.​ပေး​နေ​သ​ဖြင်. ​ဆောင်.​လိုး​ပါ​တော.​သည် ‘ ​ဗျွတ်​ဗျွတ် ​ဘွတ် ​အင်.​အ ​ဟင်.​ဟင်. ​အိ​အိ ​အ​မ​လေး ​ဦး​ရယ် ​အ ​အ ​ဟင်. ​ဟင်. ​သ​ဇင်​ကို​ညှာ​ပါ ​အုံး ’ ​ဟု ​ပြော​သာ​နေ​သည် ​မ​သ​ဇင် ​မှာ ​ကု​လား​လီး​ကြီး ​သူ.​စောက်​ပတ်​ထဲ​မှ ​လွတ်​ထွက်​သွား​မှာ ​စိုး​ပြီး ​ကော.​ကော. ​ကာ ​အ​လိုး​ခံ​နေ​မိ​သည် ၊ ​ရာ​ဂျုး​လည်း ​အ​ချက် ၄၀/၅၀ ​ခန်. ​ခပ်​ကြမ်း​ကြမ်း ​ဆောင်.​လိုး​ပြီး ​ပုံ​စံ​ပြောင်း​ရန် ‘ ​သ​ဇင် ​တ​မျိုး​ပြောင်း​ရ​အောင် ​ဘေး​တိုက်​နေ​ပြီး ​ဖင်​ကို ​ဦး​ဖက်​ပစ် ​ထား​လိုက်​နော် ’​ပြော​လိုက်​ရာ ​မ​သ​ဇင် ​လည်း ​ရှက်​ရှက် ​နဲ.​ပင် ​ဏှာ​ထန်​နေ​ပြီ​မို.​ကု​လား​ခိုင်း​သည်. ​အ​တိုင်း ​နေ​ပေး​ရင်း ​အ​မေ​တူ​သ​မီး​ပေ​မို. ​ဖင်​ကို ​အ​နောက်​သို.​အ​စွမ်း​ကုန်​ကောက်​ပေး​ထား​သည် ၊ ​ရာ​ဂျုး ​လည်း ​အ​နောက်​မှ ​စောက်​ပတ်ဝ ​တွင်​လီး​ကြီး​တေ.​ကာ ​မ​သ​ဇင်​၏​နို.​လေး​ကို ​ကိုင် ​ကာ ​ဆောင်.​လိုး​ပါ​တော.​သည် ၊ ‘ ​ဗျွတ်​ဗျွတ် ​ဘွတ်​ဘွတ် ​ဘ​လွတ်​ဗျွတ် ​အင်.​အ ​ဟင်.​ဟင်. ​အိ ​အိ ​အ​အ ​အ​ဟင်.​အင်. ​ဗျွတ်​ဗျွတ် ’ ​နှင်. ​အ​သံ​စုံ​ထွက်​ကာ ​မ​သ​ဇင် ​လည်း ​ဖင်​ကို​နောက်​သို.​ပစ်​ပေး ​ရင်း ​ကု​လား​လီး ​အ​လိုး​ခံ ​ရ​သည်. ​အ​ရ​သာ ​စွဲ​သွား​ပါ​သည် ၊
​ဒီ​လို​နဲ. ​ရာ​ဂျုး ​လည်း ​အ​ချက် ၅၀ ​ခန်. ​ဆောင်.​လိုး ​ရင်း ​သုတ်​ရည်​များ ​မ​သ​ဇင်​၏ ​စောက်​ပတ်​လေး ​ထဲ ​ပန်း​ထဲ.​ကာ ​ပြီး​သွား​ပါ​သည် ၊ ​မ​သ​ဇင် ​က​တော.​ပြီး​တာ ၂ ​ခါ​ရှိ​ပြီိ​မို. ​စောက်​ရည် ​နှင်. ​သုတ်​ရည်​များ ​ဖင်​ကြား​ထဲ​သို. ​စီး​ကျ​လာ​ပါ​သည် ၊ ​ရာ​ဂျုး ​လည်း ​အ​ဝတ်​စား​ပြန် ​ဝတ်​ပြီး ​မ​သ​ဇင်​အ​ခန်း​မှ ​ပြန်​ထွက်​လာ​ခဲ.​ပါ​သည် ၊ ​မ​သ​ဇင် ​က​တော. ​အ​လိုး​ကောင်း​ကောင်း​ခံ ​လိုက်​ရ​ရ်ျ ​အ​လို​ပြည်. ​ကာ ​ဒီ​အ​တိုင်း​ပင် ​အိပ်​ပျော်​သွား​ပါ​တော.​သည် ၊
​မ​သ​ဇင်​၏ ​အ​ပျို​ရည်​ပျက် ​ဇာတ်​လမ်း ​ပြီး​ပါ​ပြီ ။ ။ ​စာ ၀၄/၇ ​မ​အေး ​နှင်. ​သ​ဘောင်္​သား ​ချာ​လီ ​တို. ​၏​အ​ချစ်​ဇာတ်​လမ်း ​အေး​အေး​ခိုင် ​က ​စိန်​ပွဲ​စား ​အိမ်​ပွဲ​စား ​အ​စုံ​လုပ်​သူ​မို. ​နယ်​စုံ​မှ ​အ​သိ​ကျွမ်း​ပေါ​များ​ကာ ​အိမ်​ဝယ်​ရန်​ရှာ​နေ​သည်. ​သ​ဘောင်္​သား​ချာ​လီ ​နှင်. ​တွေ.​ကာ ​မ​အေး ​ရှာ​ပေး​သည်.​အိမ်​ဝယ်​ဖြစ်​သွား ​ပြီး ​ရင်း​နှီး​သွား​ကြ​ကာ ​ချာ​လီ ​က​လည်း ​နိုင်​ငံ​ပေါင်း​စုံ ​စော်​ပေါင်း​စုံ ​လိုး​နေ​သူ​မို. ​မိန်း​မ​ကျမ်း​ကျေ ​ကာ ​မ​အေး ​ဏှာ​ထန်​မှန်း ​ခန်.​မှန်း​မိ​ပြီး ​မ​အေး​၏ ​ဖြူ​နု​သော ​အ​သား​ရည် ​နု​နယ်​အ​ရွယ်​တင်​ပြီး ​ချော​မော​လှ​ပ ​သျော​န​ထ​ပ ​ရုပ်​ရည် ​တင်း​ရင်း​မို.​မောက်​သော ​နို.​အ​စုံ ​သေး​သွယ်​သော​ခါး​လေး ​နှင်. ​ကား​စွင်.​ပြီး​ကောက်​နေ​သည်. ​ဖင်​ကြီး ​အား ​သ​ဘော​ကျ​ကာ ​လိုး​ချင်​နေ​မိ​တာ​မို.​ရော​ထား​လိုက်​တာ ​ဖြစ်​သည်၊
​မ​အေး ​က​လည်း ​ချာ​လီ ​၏ ​ရုပ်​ချော​မော​ကာ ​ကိုယ်​လုံး​တောင်.​တောင်. ​ကို​ကြည်.​ကာ ​ကုန်း​ချင် ​ခံ​ချင်​နေ​တာ​မို. ​အ​ရော​တ​ဝင်​နေ​ရင်း ​အ​လှ​ကုန်​ဆိုင် ​စပ်​တူ​လုပ်​ရန် ​ချာ​လီ ​အ​ခန်း​တွင် ​ဆေး​သုတ် ​ပြင်​ဆင်​နေ​ကြ​ပါ​သည်၊ ​ဆိုင်​အ​တွက် ​လို​တာ​ဝယ်​ရင်း ​တ​ပူး​တွဲ​တွဲ​နှင်. ​ရင်း​နှီး​လာ​ကြ​ပြီး ​တ​နေ. ​ဆိုင်​ခန်း ​သို.​နှစ်​ယောက်​သား ​ချာ​လီ​ကား​ဖြင်. ​နေ.​လည်​ဖက် ​ပြန်​လာ​ကြ​ကာ ​ချာ​လီ ​က ‘ ​လာ ​မ​မ​အေး ​အ​ပြင်​မှာ​ပူ​တယ် ​ဆို​ကာ ​သူ.​အ​ပေါ်​ထပ်​အိပ်​ခန်း​ထဲ​ခေါ်​လိုက်​သည် ’ ​အ​ခန်း​ထဲ​တွင် ​အဲ​ယား​ကွန်း ​နှင်.​မို. ​အေး​နေ​ပြီး ​ထိုင်​စ​ရာ ​ခုံ ​မ​ထား​တာ​မို. ​မ​အေး ​လည်း ​ကု​တင်​ပေါ်​ထိုင်​လိုက်​ရ ​သည်၊ ​ချာ​လီ ​က ​ဏှာ​ရုပ်​ရှင် ​ကို​ဖွင်.​ခဲ.​ပြီး ‘ ​မ​မ​အေး ​အေး​ဆေး​နေ​နော် ​အား​မ​နာ​နဲ. ​လှဲ​ချင်​လှဲ​လို. ​ရ​တယ် ​ကျွန်​တော် ​အောက်​ထပ်​မှာ ​အ​အေး​သွား​ယူ​လိုက်​အုံး​မယ် ’ ​ဆို​ကာ ​အောက်​ထပ်​သို. ​ဆင်း ​သွား​ပါ​သည်၊
​မ​အေး ​လည်း ​တ​ယောက်​ထဲ ​ဗီ​ဒီ​ယို ​ကြည်.​နေ​ရာ ​ဏှာ​ကား​ထဲ​တွင် ​လိုး​ခန်း​ရောက်​လာ ​ပြီ​မို. ​ကြည်.​ရင်း ​ကာ​မ​ပိုး​များ ​ထြွ​က​လာ​ကာ ​ဖင်ဝ ​ရွ​စိ​ရွ​စိ​ဖြစ်​နေ​ပါ​သည်၊ ​ချာ​လီ ​လည်း ​မ​အေး ​အ​တွက် ​ကာ​မ​ထြွ​က​ဆေး​ရော​ထား​သည်. ​အ​အေး ​နှင်. ​သူ​က​တော. ​ဘီ​ယာ​တ​ဘူး ​ဖောက်​သောက် ​ကာ ​အ​ပေါ်​ထပ်​ပြန်​တက်​လာ​ပြီး ‘ ​မ​မ​အေး ​ရော. ​အ​အေး​သောက်​လိုက်​အုံး ’ ​ဆို​ကာ ​မ​အေး ​နား ​ကပ်​ကာ​ထိုင်​လိုက်​ပြီး ​လက်​တ​ဖက်​က ​မ​အေး​၏ ​ခါး​လေး​ကို​ဖက်​ရင်း ‘ ​ရုပ်​ရှင်​ကောင်း​လား ​မ​အေး’ ​ဟု​မေး​လိုက်​ရာ ​မ​အေး ​လည်း ​စိတ်​ဝင်​တ​စား ​ဏှာ​ကား​ကြည်.​နေ​ပြီး​မှ ​ရှက်​သွား​ပြီး ​အ​အေး​ကို ​မော.​သောက်​လိုက်​ပြီး ‘ ​ဟယ် ​ချာ​လီ ​က​လည်း ​ဘာ​ခွေ​ကြီး​မှန်း​မ​သိ​ဘူး ’ ​ဟု​ပြော​ရင်း ​ချာ​လီ ​ပု​ခုံး ​ပေါ်​မှီ​လိုက်​ပါ​သည်၊
​ချာ​လီ ​လည်း ​ကာ​မ​ဆေး ​တန်​ခိုး​ပြ ​သည်​အ​ထိ ​အ​ချိန်​ဆွဲ​ကာ ​မ​အေး ​အား ​ဏှာ​ကား ​ဆက်​ကြည်.​နေ​စေ​ပြီး ​ခါး​ကို​ဖက်​ထား​သည်. ​လက်​က ​မ​အေး ​ဖင်​ကြီး​ကို ​ပွတ်​သပ်​ကာ ​ဖင်​ကြား ​မြောင်း​ထဲ ​က​လိ​ပေး​နေ​တာ​မို. ​မ​အေး ​လည်း ​ဏှာ​ထန်​လာ​ပြီး ​ဖင်​ကြီး​ကို ​ကော.​ကာ ​အ​သာြွ​က​ပေး ​လိုက်​ရာ ​ချာ​လီ ​လည်း ​ဖင်​ကြား​ကို​နှိုက်​ကာ ​စောက်​ပတ်​ဖောင်း​မို.​မို. ​ကို ​ထ​မီ​ပေါ်​မှ ​ပွတ်​ပေး​လိုက် ​ပါ​သည်၊ ​မ​အေး ​လည်း ​ကာ​မ​ထြွ​က​ဆေး ​တန်​ခိုး ​နှင်. ​ပင်​ကို​ဏှာ​ထန်​စိတ် ​တို.​ပေါင်း​ကာ ​မ​ရှက် ​နိုင် ​တော.​ဘဲ ‘ ​အို. ​ဟို. ​အာ. ​ချာ​လီ​ရယ် ​ဘယ်​လို​လုပ်​နေ​တာ​လဲ ​အာ. ​အင်. ​ဟင်. ​အေး ​မ​နေ ​တတ် ​တော.​ဘူး ​အ​ဟင်. ​ဟင်. ’ ​ဟု ​ညည်း​ညူ​ရင်း ​တွန်.​လိမ်​နေ​ပါ​တော.​သည်၊
​ချာ​လီ ​လည်း ​လက်​တ​ဖက်​က ​မ​အေး ​ဖင်​နှိုက်​နေ​ရင်း ​နောက်​တ​ဖက်​က ​မ​အေး​၏ ​င်္အ​ကျီ ​ကျယ်​သီး​များ ​ဖြုတ်​ကာ ​ဘ​ရာ​စီ​ယာ ​လှန်​တင်​လိုက်​ပြီး ​မ​အေး​၏ ​နို.​ဖြူ​ဖြူ ​မို.​မို.​လေး ​ကို​နယ်​ကာ ​နို.​သီး​ခေါင်း​ကို ​ချေ​ပေး​လိုက်​ရာ ​မ​အေး​မှာ ​မ​နေ​နိုင်​အောင် ​ရွ​နေ​ပြီ​မို. ​င်္အ​ကျီ​ချွတ်​ကာ​ဘ​ရာ​စီ​ယာ​ကို ​ပါ ​ဂျိတ်​ဖြုတ်​ကာ​ချွတ်​ပေး​လိုက်​ပါ​သည် ​ထို.​နောက် ​လက်​တ​ဖက်​က ​ချာ​လီ. ​ဘောင်း​ဘီ ​ဇစ်​ဖြုတ် ​စာ ၀၄/၈
​ကာ ​လီး​ကြီး​ကို ​နှိုက်​ထုတ်​လိုက်​ပြီး ​ဂွင်း​ထု​ပေး​ရင်း ​ဏှာ​ကား​ဆက်​ကြည်.​နေ​ပါ​သည်၊ ​နောက် ​တော. ​ချာ​လီ​၏ ၇.၅ ​ခန်.​ရှည်​ကာ ​အ​တော်​တုတ်​သည်. ​လီး​ကြီး​ကို ​တပ်​မက်​စွာ ​ငုံ.​ကြည်.​လိုက် ​ပြီး ​မတ်​တပ်​ထ​ရပ်​လိုက်​ကာ ​ကု​တင်​ဖျား​တွင် ​ထိုင်​နေ​သည်. ​ချာ​လီ​ရှေ. ​ခြေ​နှစ်​ချောင်း​ကြား ​ဝင်​ရပ် ​လိုက်​ရာ ​ချာ​လီ. ​မျက်​နှာ​နှင်. ​မ​အေး​၏​နို.​ကြီး ​မှာ ​အ​တော်​ပင်​ဖြစ်​သွား​တာ​မို. ​ချာ​လီ ​လည်း ​စုပ်​ငုံ ​လိုက်​ပြီး ​နို.​သီး​ခေါင်း​နီ​နီ​လေး ​ကို ​သွား​ဖြင်. ​အ​သာ​ကိုက်​ရင်း ​လက်​နှစ်​ဖက်​က ​မ​အေး​၏ ​ထ​မီ ​ကို ​ဆွဲ​ချွတ်​ကာ ​မ​အေး​၏ ​ကောက်​ပြီး ​ကား​စွင်.​နေ​သည်. ​ဖင်​ဖြူ​ဖြူ​ကြီး ​ကို ​နယ်​ပေး​နေ​လိုက်​ပြီး ​တ​ခါ ​တ​ခါ ​ဖင်​ကြား​ထဲ​နှိုက်​ကာ ​ဖင်​စ​အိုဝ ​ကို ​လက်​ညိုး​ဖြင်. ​က​လိ​ပေး ​လိုက်​တာ​မို. ​မ​အေး​မှာ ‘ ​အို. ​ချာ​လီ​ရယ် ​အာ. ​ဟာ. ​အိ. ​အိ. ​အင်. ​အ​ဟင်. ​ဟင်. ​ကောင်း​လိုက် ​တာ​ကွယ် ​အာ. ​တ​မျိုး​ကြီး​ဘဲ ​အေး ​ဖင်ဝ​မှာ ​ရွ​စိ​ရွ​စိ ​နဲ. ​အ​ဟင်. ​အင်. ​အင်. ’ ​ဟု ​အ​ရှက်​မ​ရှိ ​ညည်း​ညူ​ကာ ​ချာ​လီ​ခေါင်း​ကို ​ဖက်​ထား​လိုက်​ပါ​သည်၊
​ထို.​နောက် ​ချာ​လီ ​က ​မ​အေး ​အား ​အိပ်​ယာ​ပေါ် ​လှဲ​စေ​ပြီး ​မ​အေး ​ပေါင်​နှစ်​ချောင်း ​ကို ​ဖြဲ​လိုက်​ရာ ​မ​အေး ​၏ ​အ​မွှေး​မဲ​ထူ​ထူ​များ ​နှင်. ​စောက်​ပတ်​ကြီး ​ကို ​အ​ထင်း​သား ​မြင်​နေ​ရ​ပါ​သည်၊ ​မ​အေး​၏ ​စောက်​ပတ် ​ကို ​ချာ​လီ ​လည်း ​ကုန်း ​လျှက်​ကာ ​စောက်​စေ.​လေး ​ကို ​လျှာ​ဖြင်.
​က​လိ​ပေး ​လိုက် ​လက်​တ​ဖက်​က ​စောက်​ပတ် ​ကို​ဖြဲ​ထား​ပြီး ​နောက်​တ​ဖက်​က ​မ​အေး​၏ ​ဖင်​စ​အိုဝ ​ကို ​က​လိ ​ကာ ​နှိုက်​ပေး​လိုက် ​လုပ်​ပေး​နေ​ရာ ​မ​အေး ​မှာ ​သူ.​စောက်​ပတ် ​အ​လျှက်​ခံ​ရ​ပြီး ​ဖင်​စ​အိုဝ ​ကို ​လက် ​ညိုး ​ဖြင်. ​ထည်.​ညှောင်.​ခံ ​နေ​ရ​တာ​မို. ​ကာ​မ ​အ​ရ​သာ​ထူး​များ ​ခံ​စား​နေ​ရ​ပါ​သည်၊
‘ ​အာ. ​ဟာ. ​အို. ​ချာ​လီ​ရယ် ​အင်. ​အ​ဟင်. ​အာ. ​ကောင်း​လိုက်​တာ ​မောင်​ရယ် ​အိ. ​အာ. ​ဟာ. ​မောင် ​လို.​ခေါ်​မယ်​ကွာ​နော် ​မောင် ’ ​မ​အေး ​မှာ ​ချာ​လီ ​၏ ​စောက်​ပတ်​လျှက် ​အ​ပြု​စု​ကောင်း ​တာ​မို. ​ခိုက်​သွား​ကာ ​ညု​နေ​ပါ​သည်၊ ​ချာ​လီ ​က​တော. ​မ​အေး ​စောက်​ပတ် ​ကို ​စိတ်​ပါ​လက်​ပါ ​လျှက်​နေ​ရင်း ​မ​အေး ​စောက်​ရည် ​ကို ​သူ.​လက်​ညိုး ​နှင်. ​လက်​ခ​လယ် ​မှာ ​ရွှဲ​အောင်​စောက်​ပတ်​ထဲ ​နှိုက်​လူး​ပြီး ​မ​အေး ​၏ ​ဖင်​စ​အို​ထဲ ​နှစ်​ချောင်း​ပူး ​ထည်.​ညှောင်.​ကာ ​က​လိ​ရင်း ​မ​အေး​၏​ဖင်​ပေါက် ​ကို ​ချဲ.​ပေး​နေ​ပါ​သည်၊
​မ​အေး ​မှာ ​ချာ​လီ ​စောက်​ပတ် ​အ​လျှက်​ကောင်း​လွန်း​တာ​ကြောင်. ​တ​ချီ​ပြီး​သွား​ကာ ​စောက်​ရည်​များ ​ထွက်​သွား​တာ​မို. ​ဖင်​ကြား​ထဲ​သို. ​စီး​ကျ​သွား​ပြီး ​ဖင်​ပေါက်​ထဲ ​လက်​ထည်.​ညှောင်. ​လို. ​ပို​ကောင်း​ကာ ​ဖင်​စ​အိုဝ ​ဟ ​လာ​ပါ​တော.​သည်၊ ​ချာ​လီ ​မျက်​နှာ​တ​ခု​လုံး ​မ​အေး​၏​စောက်​ရည် ​များ ​ရွှဲ​စို​နေ​ကာ ​ချာ​လီ ​က ​ဆက်​ပြီး ​စောက်​ပတ် ​လျှက်​ပေး​နေ ​ဖင်​စ​အို ​ထဲ​နှိုက်​နေ​တာ​မို. ​မ​အေး ​မှာ ​မ​နေ​နိင်​တော.​ဘဲ ‘ ​အို. ​အာ. ​ဟာ. ​မောင်​ရယ် ​လိုး​ပါ​တော.​လား ​အေး ​ခံ​ချင်​လှ​ပြီ ’ ​ဟု ​ပေါ် ​တင်​ပင် ​မ​ရှက်​မ​ကြောက် ​ပြော​လိုက်​တာ​မို. ​ချာ​လီ ​လည်း ​မ​အေး​စောက်​ပတ် ​ကို​လျှက်​နေ​တာ ​ရပ် ​ကာ ​မတ်​တပ်​ထ ​လိုက်​ရင်း ‘ ​နေ​အုံး​လေ ​မ​မ​အေး​ရဲ. ​မောင်. ​လီး​စုပ်​ပေး​အုံး​လေ ’ ​ဟု​ပြော​ရင်း ​ကု​တင်​ပေါ် ​ပက်​လက်​အိပ်​နေ​သည်. ​မ​အေး​၏ ​ရင်​ညွန်.​ပေါ် ​ခွ​ထိုင်​ကာ ​လီး​ကြီး ​ကို ​မ​အေး​၏ ​ပါး​စပ် ​ထဲ ​ထည်.​ညှောင်. ​လိုက်​ပါ​သည်၊
‘ ​အု ​အု ​အင်. ​ပျွတ်​ပျွတ် ​ပ​လွတ် ​အု ​အု ​ပျွတ်​ဈွပ်​ဈွပ် ’ ​နှင်. ​မ​အေး ​မှာ ​ချာ​လီ ​လီး​ကြီး ​သူ.​ပါး​စပ် ​ထဲ ​မ​ဆန်.​မ​ပြဲ ​ဝင်​ထွက် ​လိုး​နေ​တာ​မို. ​အ​သံ​ပင်​မ​ထွက်​နိုင်​ဘဲ ​မျက်​တောင်​မှေး​စင်း​ကာ ​လီး​စုပ်​ပေး​နေ​ပါ​သည်၊ ​ချာ​လီ ​က ​ခပ်​ကြမ်း​ကြမ်း​ပင် ​မ​အေး​၏ ​ပါး​စပ် ​ကို​ဆောင်.​လိုး ​နေ​တာ​မို. ​မ​အေး ​မှာ ​အာ​ခေါင်​ထဲ​ထိ ​ဝင်​ကာ ​တ​အု​အု ​နှင်. ‘ ​နင် ’ ​နေ​ပါ​သည်၊
​အ​တန်​ကြာ​အောင် ​ချာ​လီ ​လည်း ​မ​အေး ​ပါး​စပ်​ကို ​တက်​လိုး​နေ​ပြီး​မှာ ‘ ​ကဲ ​မ​မ​အေး ​လိုး​ကြ​ရ​အောင် ’ ​ဆို​ကာ ​သူ.​လီး​ကြီး​ကို ​မ​အေး ​ပါး​စပ်​ထဲ​မှ​ထုတ်​လိုက်​ပါ​သည်၊ ​မ​အေး ​လည်း ​အ​ခု​မှ ​အ​သက်ဝ ​အောင်​ရှု​ရ​ပြီး ‘ ​ဟွင်. ​မောင် ​က ​အ​ရမ်း​ကြမ်း​တာ​ဘဲ ​မု​ဒိမ်း​ကျင်.​နေ​သ​လို​ဘဲ ​လူ​ဆိုး​လေး ​အေး ​က​တော. ​ချစ်​လို. ​အ​လို​လိုက်​ပြီး ​သူ​လုပ်​သ​မျှ​ခံ​နေ​တာ ​ဖင်​ပေါက်​ကို ​နှိုက်​ထား ​တာ​လဲ ​ရွ​စိ​ရွ​စိ ​ဖြစ်​နေ​ပြီ ’ ​ဟု​ပြော​ပြီး ​ပြီ​တီ​တီ ​ကြည်.​ကာ ​ညု​နေ​ပါ​သည်၊ ​မ​အေး ​က ၃၅ ​နှစ်. ​မို. ​ချာ​လီ ​ထက် ၄ ​နှစ်​ခန်.​ကြီး​ကာ ​ချာ​လီ ​၏ ​ယော​င်္ကျား​ပီ​သ​သည်. ​ရုပ်​ရည် ​ကို ​ခိုက်​နေ​တာ​မို. ​စ​တွေ.​ထဲ​က ​အ​တင်း​ကပ်​ရော​ကာ ​ကုန်း​ဖို. ​အ​လိုး​ခံ​ဖို. ​စဉ်း​စား ​နေ​တာ ​ဖြစ်​သည်၊ ​မ​အေး ​က​ပင် ‘ ​ကဲ ​မောင် ​ဘယ်​ပုံ​စံ​နဲ. ​အေး ​ကို ​လိုး​မှာ​လဲ ​ပြော ’​ဟု​ပြော​လိုက် ​သ​ဖြင်. ​ချာ​လီ ​က ‘ ​မောင် ​ပက်​လက်​အိပ်​ပေး​မယ် ​မ​မ​အေး ​အ​ပေါ်​က​တက်​ဆောင်.​ပေး ​မ​မ​အေး ​မျက်​နှာ ​လေး​ကြည်.​လိုး​ချင်​လို. ’ ​ဟု​ပြန်​ပြော​ပြီး ​ကု​တင်​ပေါ် ​ပက်​လက်​လှဲ​လိုက်​ပါ​သည်၊
​မ​အေး ​လဲ ​ချာ​လီ​ပေါ်​ခွ​ကာ ​လီး​ကြီး​ကို ​ကိုင်​ကာ ​သူ.​စောက်​ပတ်ဝ ​တေ.​ပြီး ​ဖြေး​ဖြေး​ချင်း ​ထိုင်​ချ​လိုက်​ပြီး ​တ​ဝက်​ခန်. ​ဝင်​သွား​သော်​အ​ခါ ​ချာ​လီ ​ရင်​အုပ်​ကား​ကား​ကြီး​ပေါ်​လက်​ထောက်​ကာ ​ဖင်​ကြီး​ကို ​နှဲ.​ကာ​ရမ်း​ကာ ​မြောက်ြွ​က​မြောက်ြွ​က​လုပ်​ပေး​လိုက်​ပါ​သည်၊
‘ ​ဗျွပ်​ဗျွပ် ​ဘွပ်​ဘွပ်​ဘွတ် ​ဖျွပ်​ဈွပ် ​ဘွပ် ​အိ. ​အာ. ​အာ. ​ဟာ. ​အို. ​မောင်​ရယ် ​ကောင်း​လိုက် ​တာ ​အင်. ​အင်. ​ဟင်. ​ကြီး​လိုက်​တဲ. ​လီး ​ဟင်း ​အိမ်​က​လူ​ကြီး​နဲ. ​ကွာ​ပါ. ​လိုး​လဲ​မ​လိုး​တတ်​ဘူး ၁၀ ​ချက်​လောက် ​ဆောင်.​ရင်း ​ပြီး​သွား​တာ ​အင်. ​အင်. ​ဟင်. ​အေး​မှာ ​တ​ခါ​မှ ​မဝ​ဘူး ​အိ. ​အာ. ​မောင် ​နဲ.​မှ​ဘဲ ​အေး ​လည်း ၀​အောင် ​အ​လိုး​ခံ​ရ​တော.​မှာ​ဘဲ ’ ​ဟု ​နောက်​မီး​လင်း ​နေ​ရင်း ​လင်​ကြီး ​မ​ကောင်း​ကြောင်း ​ပြော​နေ​ပါ​သည်၊
​ချာ​လီ ​က ​အောက်​က​နေ ​ကော.​ပေး​ရင်း ​မ​အေး ​၏ ​ဖင်​ကြီး ​ကို​ဖြဲ​ကိုင်​ကာ ​လက်​တ​ဖက် ​က ​ဖင်​စ​အိုဝ ​ထဲ​နှိုက်​ပြီး ​က​လိ​ကာ ​ဖင်​ပေါက် ​ကို​ချဲ.​ပေး​နေ​ရင်း ‘ ​မ​မ​အေး ​က​လည်း ​မောင်. ​သူ​ငယ်​ချင်း ​ကို​အောင်. ​ကို​လည်း ​ကုန်း​သေး​တယ်​မ​ဟုတ်​လား ​မ​သိ​တာ​ကြ​နေ​တာ​ဘဲ ’ ​ဟု​ပြော ​လိုက်​ရာ ​မ​အေး ​က ‘ ​အို ​မောင် ​က​လည်း ​သူ​နဲ.​က ​တ​ခါ​တ​လေ​ပါ ​သူ. ​ကို​မ​ကြိုက်​ပါ​ဘူး ​ဟွင်. ​အေး ​က ​မောင်. ​ကို​ချစ်​တာ ​မောင်. ​အ​လိုး​ဘဲ​ခံ​ချင်​တာ ​အင်. ​အင်. ​ဟင်. ​ဟာ. ​အို. ​အီး ​အား ​ဟာ. ​အို. ​မောင်​ရယ် ​ဖင်​ထဲ​နှိုက်​တာ ​ခံ​လို.​ကောင်း​လိုက်​တာ ​အ​ဟင်. ​အင်. ​အင်. ​အာ. ​လက်​နှစ် ​ချောင်း ​ပူး​ထည်.​ပါ​လား ​ဖင်ဝ ​မှာ​ရွ​စိ​ရွ​စိ ​နဲ. ​အေး ​ဖင်​တောင် ​ခံ​ချင်​လာ​ပြီ ​အိ. ​အိ. ​အာ. ​အင်. ​အ​ဟင်. ’ ​နှင်. ​မ​အေး ​မှာ ​ဏှာ​ထန်​နေ​ကာ ​အ​ရှက်​မ​ရှိ​ပြန်​ပြော​ရင်း ​ဖင်​ကြီး ​ကို​မြောက်ြွ​က​မြောက်ြွ​က ​လုပ် ​ရင်း ​စ​ကော​ဝိုင်း ​မွှေ.​ပေး​နေ​ပါ​သည်၊
​ချာ​လီ ​လည်း ​မ​အေး ​၏ ​ဏှာ​ထန်​ကာ ​ရှုံ​မဲ.​ပြီး ​အ​လိုး​ခံ​နေ​သည်. ​မ​အေး ​မျက်​နှာ​အ​ရ​သာ ​ခံ​ကြည်.​ကာ ​ဖင်​ခေါင်း​ထဲ ​လက်​နှိုက်​က​လိ​ပေး​နေ​ရင်း ‘ ​မ​မ​အေး ​စောက်​ပတ် ​က ​အ​ရည်​ရွှဲ​နေ ​တာ ​ဘဲ ​လိုး​လို.​ကောင်း​တယ် ​ပြီး​မှ ​မ​မ​အေး ​ဖင်​ကို​ပါ ​လိုး​ပေး​မယ် ​စိတ်​ချ ​နောက်​ဆို ​မ​မ​အေး ​ဖင်​ဘဲ​ခံ ​ချင်​သွား​မယ် ’ ​ဟု​ပြော​လိုက်​ပါ​သည်၊ ​မ​အေး ​က ‘ ​ဗျွိ​ဗျွိ ​ဗျွပ်​ဗျွပ် ​ဘွပ်​ဘွတ်​ဘွတ် ​ဖျွပ်​ဈွပ် ​အီး ​အား ​အို. ​မောင်​ရယ် ​ဟင်. ​အင်. ​အင်. ​အာ. ​မောင်. ​ကို ​ချစ်​လို. ​ဖင်​ပေး​တာ ​အေး ​ဖင် ​က ​ပတ်​ကင်​ဘဲ​ရှိ ​သေး​တာ ​ဘယ်​သူ​မှ ​မ​လိုး​ရ​သေး​ဘူး ​ဟင်. ​ဟင်. ​ဟာ. ​အာ. ’ ​နှင်. ​ညည်း​ညူ​ရင်း ​ပြန်​ပြော​လိုက် ​ပါ​သည်၊
​ချာ​လီ ​လည်း ​ကျေ​နပ်​သွား​ကာ ‘ ​မ​မ​အေး ​က ​ဒါ​ကြောင်. ​ချစ်​ဖို. ​လိုး​ဖို. ​ကောင်း​တာ ’ ​ဟု ​စာ ၀၄/၁၀
​ပြော​လိုက်​ရာ ​မ​အေး ​လည်း ​ကျေ​နပ်​သွား​ပြီး ‘ ​ဟွင်. ​အ​ခု​မှ ​လူ​ဆိုး​လေး ​ဟင်. ​ဟင်. ​အင်. ​အာ. ​အို. ​ကောင်း​လိုက်​တာ​ကွယ် ​အိ. ​အိ. ​အာ. ​ဟာ. ​အ​ဟင်. ​အင်. ​အင်. ​အင်. ’ ​နှင်. ​ဖင်​ကြီး ​ကို ​နှဲ.​ရမ်း​ကာ ​အ​လိုး​ခံ ​အ​သုံး​တော်​ခံ​နေ​ပါ​တော.​သည်၊
​ချာ​လီ ​လည်း ​အား​ရ​ပါး​ရ ​ကြုံး​လိုး​ချင်​တာ​မို. ‘ ​မ​မ​အေး ​ပုံ​စံ​ပြောင်း​ရ​အောင် ​မောင် ​အ​ပေါ်​က ​တ​လှည်. ​တက်​လိုး​ပေး​မယ် ’ ​ဆို​လိုက်​သ​ဖြင်. ​မ​အေး ​က ​ချာ​လီ ​ပေါ်​မှ​ထ​ရင်း ‘ ​မောင် ​အေး ​မှောက်​အိပ်​ပြီး ​ဖင်​ကြီး ​ကောက်​ပြီး​ကော.​ပေး​မယ်​လေ ​မောင် ​အ​ပေါ်​က​နေ ​အေး ​ကို ​တက် ​လိုး ​ပေး​ပေါ. ’ ​ဟု ​ပြော​ပြီး ​ကု​တင်​ပေါ် ​မှောက်​အိပ်​ကာ ​ဖင်​ကြီး​ကောက်​ကာ ​ကော.​ပေး​ထား​လိုက် ​ပါ​သည်၊ ​ချာ​လီ ​လည်း ​မ​အေး ​၏ ​ကား​စွင်.​လုံး​ဝိုင်း​ပြီး ​က​လေး​မွေး​ပြီး​သား ​အ​လိုး​ခံ​ရ​တာ​များ​လို. ​ဖင်​ကြား​ဟ ​နေ​သည်. ​ဖင်​ကြီး ​ကို ​ကြည်.​ကာ ​အ​နောက်​မှ​တက်​ခွ​ပြီး ​မ​အေး​၏ ​စောက်​ပတ်ဝ ​သူ. ​လီး​ကြီး ​တေ.​ကာ ​သွင်း​လိုက်​ပါ​သည်၊​နောက် ​မ​အေး​ပေါ်​ထပ်​အိပ်​လိုက်​ပြီး ​လက်​နှစ်​ဖက် ​က​မ​အေး ​၏ ​နို.​မို.​မို. ​အ​စုံ​ကို ​ကိုင်​ကာ​နယ်​ကာ ​ဆောင်.​လိုး​ပါ​တော.​သည် ၊
‘ ​ဗျွပ်​ဗျွပ် ​ဘွပ်​ဘွတ်​ဘွတ် ​ဖျွပ်​ဈွပ် ​ဘွပ်​ဘွပ် ​အီး ​အား ​ဟာ. ​အို. ​ကျွတ်​ကျွတ် ​မောင်​ရယ် ​ဟာ. ​အာ. ​အင်. ​အင်. ​ဟင်. ​ကောင်း​လိုက်​တာ ​ဆောင်. ​ဆောင်.​လိုး ​အေး ​ကို ​မ​ညှာ​နဲ. ​အိ. ​အိ. ​အာ. ​အင်. ​အ​ဟင်. ’ ​နှင်. ​မ​အေး ​မှာ ​ဏှာ​ကြီး​လှ​သူ​မို. ​ဘို​မ​များ​လို ​အ​သံ​ထွက်​ကာ ​အ​လိုး​ခံ​နေ​ပါ ​သည်၊
​ချာ​လီ ​ဆောင်.​လိုး ​လိုက်​တိုင်း ​မ​အေး ​၏ ​လုံး​ဝိုင်း​ကား​စွင်. ​သည်. ​ဖင်​ကြီး​မှာ ​ပြား​ကပ် ​သွား​ပြီး ​လီး​အ​ပြန်​အ​ထုတ်​တွင် ​ဖင်​ကြီး ​ပြန်​ကော.​ကာြွ​က​တက်​လာ​ကာ ​မ​အေး ​က​လည်း ​ဆောင်.​လိုး​ချက် ​အ​တိုင်း ​ဖင်​ကြီး​ကို ​ပစ်​ကော.​ပေး​နေ​ကာ ​နှစ်​ယောက်​သား ​အ​ပေး​အ​ယူ​မျှ​နေ​ပါ ​သည်၊ ‘ ​ဘွပ်​ဘွပ် ​ဗျွပ်​ဗျွပ် ​ဘွတ်​ဖျွပ် ​ဈွပ်​ဈွပ် ​အင်. ​အင်. ​ဟင်. ​အာ. ​ဟာ. ​အို. ​ကောင်း​တယ် ​မောင်​ရယ် ​မ​ရပ်​နဲ. ​ဆောင်.​လိုး ​အာ. ​အာ. ​ဟာ. ​ဟင်. ​ဟင်. ​အ​ဟင်. ​အင်. ​အေး ​ကို ​ဗိုက်​ကြီး ​အောင် ​လိုး​ပေး ​အိ.​အိ. ​အာ. ​ဒါ​မှ ​မောင် ​နဲ.​တူ​တဲ. ​သား​လေး​မွေး​မှာ ​အင်. ​အင်. ​ဟင်. ’ ​မ​အေး ​မှာ ​ဏှာ​ထန်​နေ​ကာ ​ဖင်​ကြီး ​ကို ​ကောက်​ပြီး​ပေး​ထား​ရင်း ​အ​ရှက်​မ​ရှိ ​ပြော​လိုက်​ပါ​သည်၊
​ချာ​လီ ​လည်း ​မ​အေး ​နို.​ကို​ကိုင်​နေ​နယ်​နေ ​ရာ​မှ ​အား​ရ​ပါး​ရ ​လိုး​လို.​ရ​အောင် ​မ​အေး ​ချိုင်း ​ကြား ​မွှေ.​ယာ​ပေါ် ​လက်​ထောက်​ကာ ​မီး​ကုန်​ယမ်း​ကုန် ​တက်​လိုး​နေ​ပါ​သည်၊ ​မ​အေး ​က​တော. ​စောက်​ပတ် ​တ​ခု​လုံး ​စောက်​ရည်​များ ​ရွှဲ​နေ​တာ​မို. ​စောက်​ခေါင်း​မှ ​အ​သံ​စုံ​ထွက်​နေ​ပါ​သည်၊ ‘ ​ဗျွိ​ဗျွိ ​ဘွပ် ​ဘွပ် ​ဘွတ် ​ဖျွပ်​ဈွပ်​ဈွပ် ​ဗျွပ်​ဗျွပ် ​ဘွိ​ဘွပ် ’ ‘ ​အင်. ​အင်. ​အား ​အို. ​ဟို. ​ဟင်. ​မောင်​ရယ် ​မ​ရပ် ​နဲ.​တော. ​အေး ​ပြီး​ချင်​နေ​ပြီ ​ဆောင်.​လိုး ​အ​ဆုံး​ထိ ​ထည်. ​အား ​ဟာ. ​အင်. ​အင်. ​ဟင်. ​ကောင်း ​လိုက်​တာ ​အိ. ​အိ. ​အာ. ​အင်. ​အင်. ’
​ချာ​လီ ​လည်း ​မ​အေး ​အ​ပေး​ကောင်း​ကာ ​ဘို​မ​များ​လို ​ဏှာ​သံ​ပေး ​အ​လိုး​ချံ​န​တာ​မို. ​အ​ချက် ၄၀-၅၀ ​ခန်. ​ခပ်​ကြမ်း​ကြမ်း ​ဆောင်.​လိုး​ရင်း ​ပြီး​သွား​တာ​မို. ​မ​အေး​၏ ​စောက်​ပတ်​ထဲ ​သုတ်​ရည် ​များ ​ပန်း​ထည်.​ကာ ​လီး​ကြီး ​ကို​မ​ချွတ်​ဘဲ ​ထပ်​အိပ်​နေ​ပါ​သည်၊ ​မ​အေး ​လည်း ​ပြီး​သွား​တာ​မို. ​စောက်​ပတ် ​ပွ​စိ​ပွ​စိ ​နှင်. ​လီး​ကြီး ​ကို​ညှစ်​ပေး​နေ​ပြီး ​ဖင်​ကြီး ​ကို​ကော.​ကာ ​ကော.​ကာ ​နှင်.​ပြု​စု​ပေး ​နေ​ရင်း ‘ ​ကောင်း​လိုက်​တာ ​မောင်​ရယ် ​အေး ​က ​မောင်.​လို ​သား​မျိုး​မွေး​ချင်​တာ ​ဒါ​ကြောင်. ​တား​ဆေး​တောင် ​မ​ထိုး​ထား​ဘူး ​သိ​လား ​ဟိ​ဟိ​ဟိ ​အိမ်​က ​လူ​ကြီး​မ​သိ​ရှာ​ဘူး ’ ​ဟု​ပြော​ကာ ​ရွ​ထ ​စာ ၀၄/၁၁
​နေ​ပါ​သည်၊ ​ထို.​နောက် ​နှစ်​ယောက်​သား ​ရေ​ချိုး​ရန် ​ထ​လိုက်​ကြ​ပြီး ​ချာ​လီ ​က ​မ​အေး ​အား​ဖက်​ခါ ‘ ​ကဲ ​မ​အေး ​လာ ​ရေ​ချိုး​ခန်း ​ထဲ​မှာ ​ရေ​ချိုး​ရင်း ​လီး​စုပ်​ပေး​အုံး ’ ​ဟု​ပြော​လိုက်​တာ​မို. ​မ​အေး ​က ‘ ​အင်း​ပါ ​မောင်​ရဲ. ​အေး ​တ​ကိုယ်​လုံး ​မောင်. ​စိတ်​ကြိုက်​လုပ်​ပါ ​ဖင် ​ကို​ပါ​ချ ​သိ​လား ​အေး​ဖင်​လေး ​က ​အ​သစ်​ဘဲ​ရှိ​သေး​တယ် ​ဘယ်​သူ​မှ ​မ​လိုး​ရ​သေး​ဘူး ’ ​ဟု ​ဏှာ​ထန်​ကာ ​ပြော​နေ​ပါ​သည်။
​မ​အေး ​၏ ​အ​ချစ်​သစ် ​ချာ​လီ ​တို. ​တ​ခန်း​ပြီး​ပါ​ပြီ။ ။
​စာ ၀၅/၁၁ ​မ​အေး ​၏ ​ဖင် ​အ​ပျို​ရည်​ပျက် ​အ​တွေ.​ကြုံ
​ရေ​ချိုး​ခန်း​ထဲ ​ရောက်​တော. ​မ​အေး ​က ​ချာ​လီ ​တ​ကိုယ်​လုံး ​ဆပ်​ပြာ ​တိုက်​ပေး​ပြီး ​လီး​ကြီး ​ကို ​သေ​သေ​ချာ​ချာ ​ပွတ်​သပ်​ပေး​နေ​ရင်း ​စိတ်​ပါ​လာ​တာ​မို. ​ဒူး​ထောက်​ထိုင်​ချ​ကာ ​သူ.​နှုတ် ​ခမ်း​ပါး​လေး​ဖြင်. ​စုပ်​ငုံ​ပေး​လိုက်​ပါ​သည်၊ ​မ​အေး ​မှာ ​ထန်​နေ​ပြီ​မို. ​လီး​ကြီး​ကို ​အာ​ခေါင်​ထဲ​အ​ထိ ​ဝင်​အောင် ​ရှေ.​တိုး​နောက်​ဆုတ် ​ခေါင်း​တ​လှုပ်​လှုပ်​ဖြင်. ​စုပ်​လိုက် ​ဒစ်​ပတ်​လည်​ကို ​လျှာ​ဖျား​လေး ​ဖြင်. ​လျှက်​ပေး​လိုက် ​တ​ခါ​တ​ခါ ​ဂွေး​ဥ​ကို​ပါ ​လျှက်​ပေး​စုပ်​ပေး​နေ​ပါ​သည်၊
‘ြွ​ပတ်ြွ​ပတ် ​ဈွပ် ​အု ​အု ​အု . . . ​အင်.ြွ​ပတ် ​ပ​လွတ် ​ဈွပ် ​ဈွပ် ​အု. ​အု. . ’ ​မ​အေး ​လီး ​အ​စုပ်​ကို ​အ​ရ​သာ​ခံ​ရင်း ​ဒူး​ထောက်​ထိုင်​ထား​တာ​မို. ​ကောက်​ကော.​ပြီး ​လုံး​ဝိုင်း​နေ​သည်. ​မ​အေး ​၏ ​ဖင်​ကြီး ​ကို ​ရ​မက်​ဆေး​ကြီး​သ​ဖွယ် ​မှီဝဲ​ရင်း ​ချာ​လီ ​မှာ ​သူ.​လီး​ကြီး​ကို ​မ​အေး ​ပါး​စပ်​ထဲ ​လိုး​နေ​ပါ ​တော.​သည်၊ ​မ​အေး ​မှာ ​အိမ်​မှာ ​လီး​ငတ်​နေ​သ​မျှ ​အ​တိုး​ချ​ကာ ​လီး​စုပ် ​အ​လိုး​ခံ​မယ်.​ပုံ​ပင်​ဖြစ်​တော. ​သည်၊ ​ထို.​နောက် ​ချာ​လီ ​က ‘ ​ကဲ ​မ​အေး ​ထ​တော. ​ကု​တင်​ပေါ်​သွား​ရ​အောင် ​ဖင်​လိုး​ပေး​မယ် ’ ​ဟု ​ပြော​လိုက်​သ​ဖြင်. ​မ​အေး ​လည်း ​ဖင်​ခံ​ကြည်.​ချင်​နေ​တာ​မို. ​လီး​စုပ်​ရပ်​ကာ ​ရေ​ပင်​မ​သုတ်​တော. ​ဘဲ ​ချာ​လီ ​ပု​ခုံး​မှီ​ကာ ​ချာ​လီ ​က​လည်း ​မ​အေး ​ဖင်​ကြီး​ကို ​နယ်​ကာ​ကိုင်​ကာ ​ရေ​ချိုး​ခန်း ​မှ​ထွက်​လာ ​ကြ​ပြီး ​ကု​တင် ​နား​အ​ရောက် ​ချာ​လီ ​က ‘ ​မ​အေး ​ကု​တင်​ပေါ်​မှာ ​လေး​ဖက်​ထောက်​လိုက်ူ​သ​အ​င​သ​ည ​လူး​ပေး​မယ် ’ ​ဆို​ကာ ​ဖင်​ချ​လျှင်​သုံး​သည်.ူ​သ​အ​င​သ​ည ​အ​က​ဘ​န ​ကို​ယူ​ကာ ​လက်​ထဲ ​ညှစ်​ထည်.​လိုက်​ပါ ​သည်၊
​မ​အေး ​လည်း ​ချာ​လီ ​အ​လို​ကျ ​လေး​ဖက်​ထောက်​ပေး​လိုက်​ရာ ​ဖင်​ကြီး​ကား​စွင်.​နေ​ပြီး ​စောက်​ပတ်​နှုတ်​ခမ်း​သား ​လန်​ထွက်​နေ​ပြီး ​က​လေး​မွေး​ဘူး​တာ​မို. ​အ​ပေါက်ဝ ​ဟ​နေ​တာ ​အ​တိုင်း ​သား ​တွေ.​နေ​ရ​ပါ​သည်၊ ​ချာ​လီ ​က ​မ​အေး ​၏ ​ကား​စွင်. ​နေ​သည်. ​ဖင်​ကြီး ​ကို ​ခွ​ကာ ​ဒစ်​ကြီး​ကို ​မ​အေး ​စောက်​ပတ်ဝ ​တေ.​ကာ ​မ​သွင်း​သေး​ဘဲ ​ဖင်​စ​အိုဝ ​နှင်. ​ဖင်​ကြား​မြောင်း​ထဲ ​ရှေ.​တိုး​နောက် ​ဆုတ် ​ညှောင်.​ကာ ​က​လိ​ပေး​လိုက်​ပါ​သည်၊
‘ ​အို. ​မောင်​ရယ် ​ဟင်. ​ဟင်. ​ဘယ်​လို​လုပ်​နေ​တာ​လဲ​ကွယ် ​အာ. ​ဟာ. ​အေး ​မ​နေ​တတ်​ဘူး ​ဖင်​ချ​ရင်​လည်း​ချ​ပါ​တော. ​ဖင်ဝ ​မှာ ​ရွ​စိ​ရွ​စိ​ဖြစ်​နေ​ပြီ ’ ​ဟု​ပြော​တော.​မှ ​ချာ​လီ ​က ​သူ.​ဒစ်​ကြီး ​ကို ​မ​အေး ​ဖင်ဝ ​တေ.​ကာ ​ဖြည်း​ဖြည်း​ချင်း ​ဖိ​သွား​လိုက်​ပါ​တော.​သည်၊ ​မ​အေး ​မှာ ​မျက်​တောင်​မှေး​စင်း ​ကာ ​ဖင်​အ​လိုး​ခံ ​သည်. ​အ​ရ​သာ​ကို ​စည်း​စိမ်​ခံ​ရင်း ​သူ.
​ဖင်ဝ ​ပွ​စိ​ပွ​စိ ​ဖြစ်​နေ​ကာ ‘ ​မောင် ​ဖြေး​ဖြေး​နော် ​အေး ​ဖင်​လေး ​က ​အ​ခု​မှ ​ဖင်​ခံ​ဘူး​တာ ​အာ. ​ဟာ. ​အ​ဟင်. ​ဟင်. ​ဘယ်​လောက်​ဝင်​သွား​ပြီ​လဲ ​ဟင် ’ ​ဟု ​မေး​လိုက်​ပါ​သည်၊ ​ချာ​လီ ​က ‘ ​အ​ခု​မှ ​လီး ​တ​ဝက်​လောက် ​ဘဲ​ဝင်​သေး​တယ် ​နာ​ရင်​လဲ ​နဲ​နဲ​တောင်. ​အောင်.​ခံ​ပေါ. ​မ​အေး​ရယ် ​ဖြေး​ဖြေး ​လိုး​ရ ​တာ ​အား​မ​ရ​ဘူး ’ ​ဟု​ပြော​ရင်း ​ချာ​လီ ​က ​မ​အေး ​၏ ​ခါး​သေး​လေး ​ကို​ဆုပ်​ကိုင်​ကာ ​ခပ်​သွက် ​သွက် ​ဆောင်.​လိုး​ပါ​တော.​သည်၊
‘ ​ဗျွိ ​ဗျွိ ​ဖျွိ ​ဖျွပ် ​ဘွပ် ​ဘွပ် ​အား ​အီး ​အို. ​မောင်​ရယ် ​ဟင်. ​ဟင်. ​ဟင်. ​အင်. ​အိ. ​အိ. ​အာ. ​အေး ​ဖင်​ကွဲ​ပါ​ပြီ ​အင်. ​အင်. ​အ​မ​လေး ​ကျွတ် ​ကျွတ် ​ကျွတ် ​အ​ဟင်. ​ဟင်. ​အင်. ​အာ. ​မောင်. ​သ ​ဘော​ရှိ​သာ ​လိုး​ပါ ​မောင်​ရယ် ​အင်. ​အင်. ​အေး ​အောင်.​ခံ​ပါ.​မယ် ​အီး ​အား ​ဟာ. ​ဟင်. ​ဟင်.’​နှင်. ​မ​အေး ​မှာ ​ချာ​လီ ​သူ.​ကို ​ပစ်​သွား​မှာ ​စိုး​ကာ ​ကြိတ်​မှိတ်​ပြီး ​ချာ​လီ ​အ​လို​ကျ ​ဖင်​လိုး​ခံ​နေ​ပါ​သည်၊ ​ချာ​လီ ​လည်း ​စော်​ကြီး ​သူ.​ကိုြွေ​က​နေ​မှန်း ​သိ​တာ​မို. ​စိတ်​ကြိုက် ​ဆောင်.​လိုး​ရင်း ​ခါ​ရမ်း ​နေ​သည်. ​မ​အေး ​၏ ​ကား​စွင်.​နေ​သည်. ​ဖင်​ကြီး ​ကို​တ​လှည်. ​မ​အေး ​ဖင်​ခေါင်း​ထဲ ​သူ.​လီး​ကြီး ​ဝင်​ထွက် ​လိုး​နေ​တာ ​တ​လှည်. ​အ​ရ​သာ​ကြည်.​နေ​ပါ​တော.​သည်၊
‘ ​ဗျွပ် ​ဗျွပ် ​ဘွတ် ​ဘွပ် ​ဘွပ် ​ဖျွပ် ​ဖပ် ​ဖပ် ​အင်. ​အင်. ​ဟင်. ​အာ. ​အ​မေ. ​အီး ​အား ​ဟာ. ​အိ. ​အိ. ​အ ​မောင်​ရယ် ​ဟင်. ​ဟင်. ​ဟင်. ​အေး ​ကို​ပစ်​မ​သွား​နဲ.​နော် ​အင်. ​အင်. ​မောင်. ​နဲ.​တူ​တဲ. ​သား ​လေး ​အေး​မွေး​ပေး​မယ် ​အိ. ​အိ. ​အာ. ​ဟာ. ​ဟင်. ​အ​ဟင်. ’ ​နှင်. ​မ​အေး ​မှာ ​ဖင်​အ​လိုး​ခံ ​နေ​ရင်း​မှ ​ချာ​လီ. ​ကို ​ညု​နေ​ကာ ​ဖင်​ကြီး ​ကို ​ပစ်​ကော.​ကာ ​စ​အိုဝ ​ပွ​စိ​ပွ​စိ​နှင်. ​ညှစ်​က​စား​ပေး​နေ​ပါ​သည်၊ ​ချာ​လီ ​က ‘ ​မ​အေး ​က ​ဖင် ​အ​ခု​မှ ​ခံ​ဘူး​ပေ​မဲ. ​အ​ပေး​ကောင်း​လိုက်​တာ ​စ​အိုဝ ​ညှစ်​က​စား ​ပေး​တာ ​ဖီးလ်​ဘဲ ​ကြာ​ကြာ​တောင် ​လိုး​နိုင်​မယ်​မ​ထင်​ဘူး ​ဖင်​လေး​က ​စည်း​နေ​တာ​ဘဲ ’ ​ဟု ​ပြော ​လိုက်​ရာ ‘ ​ဟင်. ​ဟင်. ​အင်. ​ဘွပ် ​ဘွပ် ​ဖျွပ် ​ဈွပ် ​ဗျွပ် ​ဗျွပ် ​ဗျွိ ​အင်. ​အင်. ​အ ​အေး ​က ​မောင်. ​ကို ​ချစ်​လွန်း​လို. ​ဖင်​လိုး​ခံ​တာ​နော် ​ဟင်. ​အင်. ​အင်. ​အီး ​အာ. ​ဟာ. ​ဖင်​ခေါင်း​ထဲ​မှာ ​အောင်.​နေ​တာ ​ဘဲ ​အိ. ​အိ. ​အာ. ​ဗျွိ ​ဗျွိ ​ဗျွပ် ​ဘွတ် ​ဘွပ် ​ဘွပ် ​အို. ​မောင်​ရယ် ​ဟင်. ​ဟင်. ​ဟင်း . . ​ဟာ. ​အာ. ​အာ. ​အီး ​ကျွတ် ​ကျွတ် ​အင်. ​အင်. ’ ​နှင်. ​မ​အေး ​မှာ ​အောင်.​လည်း​အောင်. ​ကောင်း​လည်း​ကောင်း ​မို. ​အ​သံ​စုံ​ထွက်​နေ​ပါ​တော.​သည်၊
​ထို.​နောက် ​ချာ​လီ ​က ‘ ​မ​အေး ​မျက်​နှာ​လေး ​ကြည်.​လိုး​ချင်​တယ် ​ဟို ​စား​ပွဲ​အ​ဖျား​မှာ ​ထိုင်​လိုက်​ပါ​လား ’ ​ဟု​ဆို​လိုက်​ကာ ​လီး​ကြီး​ကို ​မ​အေး ​ဖင်​ခေါင်း​ထဲ ​မှ ‘​ဘ​လွ​တ’် ​က​နဲ ​ဆွဲ​ထုတ် ​လိုက်​ရာ ​မ​အေး ​က​လည်း ‘ ​အေး ​တ​ကိုယ်​လုံး ​မောင်. ​သ​ဘော​ရှိ​ပါ​ကွယ် ​ဟွန်. ​အေး ​ကို​တော. ​ပစ်​မ​သွား​ရ ​ဘူး​နော် ’ ​ဟု​ပြန်​ပြာ​ရင်း ​ကု​တင်​ပေါ်​မှ​ထ​ကာ ​စား​ပွဲ ​အ​ဖျား​တွင် ​ဖင်​ကြီး​တင်​ကာ ​ပေါင်​ဖြဲ​ကား ​ဒူး​ကွေး​ပြီး ​စား​ပွဲ​အ​စွန်း​တွင် ​ခြေ​တင်​ကာ ​လက်​နှစ်​ဖက်​က ​အ​နောက်​သို. ​ထောက် ​ကာ ​ကိုယ်​ကို ​ခပ်​လန်​လန် ​နေ​ရင်း ‘ ​ကဲ ​ဒီ​ပုံ​စံ​ကြိုက်​ပြီ​လား ​လာ​လေ ​မောင်​ရဲ. ​မြန်​မြန်​လိုး​ပါ ​ဒီ ​မှာ ​တ​ဝက်​တ​ပျက်​နဲ. ​အေး ​ဖင်​ထဲ ​ရွ​စိ​ရွ​စိ​ဖြစ်​နေ​ပြီ ’ ​ဟု ​ဏှာ​ထန်​နေ​ကာ ​ညု​နေ​ပါ​သည်၊
​မ​အေး ​စား​ပွဲ​ပေါ်​တွင် ​ဖြဲ​ကား​ကာ ​ထိုင်​နေ​တာ​မို. ​စောက်​ပတ်​ကြီး ​ပြဲ​လန် ​နေ​ပြီး ​ဖင်​ပေါက်ဝ ​မှာ​လည်း ​ပွ​စိ​ပွ​စိ ​နှင်. ​ဟ ​နေ​တာ​ကြည်.​ကာ ​ချာ​လီ ​လည်း ​ဒစ်​ကြီး​ကို ​မ​အေး ​ဖင်ဝ ​တေ.​ကာ ​လက်​နှစ်​ဖက်​က ​မ​အေး ​ပေါင်​အောက်​မှ​လျှိ​ကာ ​စား​ပွဲ​ပေါ်​ထောက်​လိုက်​ပြီး ​မ​အေး ​၏
​နှုတ်​ခမ်း​ပါး​ရဲ​ရဲ​လေး ​ကို ​စုပ်​နမ်း​လိုက်​ပြီး​မှ ‘ ​မ​အေး ​ထည်.​တော.​မယ်​နော် ’ ​ဟု ​ပြော​လိုက်​တာ​မို. ‘ ​ဟွန်. ​မောင် ​က​လေ ​သိပ်​မုန်း​စ​ရာ​ကောင်း​တယ် ​သူ​များ ​အ​နေ​ရ​ခက်​အောင် ​ဖင်​ပေါက်​တေ. ​ထား ​စာ ၀၅/၁၃
​ပြီး ​မ​လိုး​သေး​ဘူး ​ကဲ​ပါ ​မောင်​ရယ် ​အေး ​ဖင်​ကို ​လိုး​ပါ​တော. ​ဟွန်း ​ကျေ​နပ်​ပြီ​လား ’ ​ဟု​ပြော ​တော.​မှ ​ချာ​လီ ​က ​တ​ဟဲ​ဟဲ ​ရယ်​ရင်း ‘ ​မ​အေး ​က ​ဒါ​တွေ​ကြောင်. ​ချစ်​ဖို.​ကောင်း​တာ ’ ​ဆို​ကာ ​မ​အေး ​၏ ​ခါး​လေး​ကို ​ဆုပ်​ကိုင်​ကာ ​လီး​ကြီး​ကို ​မ​အေး ​ဖင်​ခေါင်း ​ထဲ ​ဖိ​သွင်း​လိုက်​ပါ​သည်၊
‘ ​ဗျွိ ​ဈွိ ​အိ. ​အာ. ​အာ. ​ဟင်. ​မောင်​ရယ် ​အို. ​အင်. ​အင်. ​ဘွပ် ​ဘွပ် ​ဗျွပ် ​ဗျွပ် ​ဖျွပ် ​ဟင်. ​ဟင်. ​ဟင်. ​အင်. ​အာ. ​ဟာ. ​ကောင်း​လိုက်​တာ ​ဖင်​ခေါင်း​ထဲ ​တစ်​စို.​ကြီး ​မောင်​ရယ် ​အ​ဟင်.​ဟင်. ​အင်. ​အင်. ​အိ. ​အ ​အ ’ ​နှင်. ​အ​သံ​ထွက်​ရင်း ​မ​အေး ​မှာ ​ချာ​လီ ​မျက်​နှာ​ကြည်.​ကာ ​ဖင်​ကြီး ​ကိုြွ​က​ကာ​ကော.​ကာ ​လုပ်​ပေး​နေ​ပါ​တော.​သည်၊
​ချာ​လီ ​လည်း ​မ​အေး ​ဏှာ​ထန်​ကာ ​ဖီးလ်​တက်​နေ​သည်.ျ​န​ထ​ပ်​ခေ​န ​အား ​အ​ရ​သာ​ခံ ​ကြည်.​ကာ ​မ​အေး ​၏ ​ခါး​လေး​ကို ​ဆုပ်​ကိုင်​ကာ ​မ​အေး ​ဖင်​ကို ​ဆောင်.​လိုး​နေ​ပါ​တော.​သည်၊
‘ ​ဗျွပ် ​ဗျွပ် ​ဖပ် ​ဖပ် ​ဖျွပ် ​ဘွပ် ​ဘွပ် ​ဘွတ် ​ဗျွိ ​ဈွိ ​အီး ​အား ​ဟာ. ​ဟာ. ​အို. ​မောင်​ရယ် ​အင်. ​အင်.
​ဟင်. ​အေး ​ဖင်​လေး​တော. ​ကွဲ​ပါ​ပြီ ​အိ. ​အိ. ​အာ. ​အ​ဟင်. ​ဟင်. ​အင်. ​ရှီး ​ကျွတ် ​ကျွတ် ​အာ. ’ ​နှင်. ​မ​အေး ​မှာ ​ကာ​မ​သု​ခ ​အ​ပြည်.၀​ခံ​စား​ရင်း ​ဖင်​စ​အိုဝ ​ညှစ်​က​စား​ပေး​ကာ ​ဖင်​ကြီး​ကို ​မြောက်ြွ​က​မြောက်ြွ​က ​လုပ်​ကာ ​ချာ​လီ. ​လီး​ကြီး​ကို ​ဧည်.​ခံ​ပြု​စု​ပေး​နေ​ပါ​သည်၊
‘ ​အို. ​မောင်​ရယ် ​ဆောင်. ​ဆောင်. ​မ​ညှာ​နဲ. ​အင်. ​အင်. ​အိ. ​အာ. ​အာ. ​ဗျွပ် ​ဗျွပ် ​ဘွတ် ​ဖျွပ် ​အီး ​အား ​ဟာ. ​ဟင်. ​ဟင်. ​ဟင်. ​အေး ​ခံ​နိုင်​တယ် ​တ​အား​ဆောင်.​လိုး ​အိ. ​အိ. ​အိ. ​အာ. ​ကောင်း ​လိုက်​တာ​ကွယ် ​အင်. ​အင်. ​အ​ဟင်. ​ဟင်. ’ ​နှင်. ​မ​အေး ​မှာ ​အ​ရှက်​မ​ရှိ​ပြော​ရင်း ​ဖင်​ကြီး​ကော.​ပြီး ​ဖင်​စ​အိုဝ ​ပွ​စိ​ပွ​စိ ​နှင်. ​ညှစ်​က​စား​ပေး​နေ​တာ​မို. ​ချာ​လီ​မှာ ​မ​ထိန်း​ထား​နိုင်​တော.​ဘဲ ​အ​ချက် ၅၀​ခန်. ​မ​နား​တမ်း ​ဆောင်.​လိုး​ရင်း ​ပြီး​သွား​ကာ ​မ​အေး ​ဖင်​ခေါင်း​ထဲ ​သုတ်​ရည်​များ ​ပန်း​ထည်.​လိုက်​ပါ ​တော.​သည်၊
​ထို.​နောက် ​ချာ​လီ ​က ​သူ.​လီး​ကြီး ​မ​အေး ​ဖင်​ခေါင်း​ထဲ​မှ ​အ​ထုတ် ​မ​အေး ​က ‘ ​နေ​အုံး ​မောင် ​ခ​ဏ​လေး ’ ​ဆို​ကာ ​ချာ​လီ ​ရှေ. ​ဒူး​ထောက်​ထိုင်​ချ​ကာ ​လီး​ကြီး​ကို ​သူ.​နှုတ်​ခမ်း​ပါး​လေး​ဖြင်. ​စုပ်​ငုံ​လိုက်​ပြီး ​ချာ​လီ ​သုတ်​ရည်​များ​ကို ​စုပ်​ယူ​နေ​ပါ​သေး​သည်၊ ​နောက် ​မ​အေး ​က ‘ ​ဟင်း . .​ဟင်. ​စုပ်​လို.​ကောင်း​လိုက် ​မောင်​ရယ် ​မဝ​သေး​ဘူး ​မောင်.​သုတ်​ရည် ​စုပ်​ချင်​သေး​တယ် ’​ဟု​ပြော​လိုက်​ပြီး ​နှစ်​ဦး​သား ​ရေ​ချိုး​ခန်း​သို. ​သွား​ကာ ​ရေ​ချိုး​ရင်း ​မ​အေး ​က ​ချာ​လီ ​လီး​ကြီး ​ကို ​စုပ်​ပေး​မှုတ်​ပေး​ပြီး ​သုတ်​ရည်​များ ​စုပ်​ယူ​မြို​ချ​လိုက်​ပြန်​တော.​သည်။
​မ​အေး ​၏ ​ဖင်​အ​ပျို​ရည်​ပျက် ​ဖင်​ခံ​ဇာတ်​လမ်း ​ပြီး​ပါ​ပြီ။ ။ SHARE